တိုင်းရင်းသားများသတင်း, တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ, မော်ကွန်း
(No. 36, June 19, 2020)
၁။ မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးချယ်ရာတွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဗဟိုမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်
၂။ ဇွန် ၁၆ ရက်ကို သျှမ်းအမျိုးသားအခွင့်အရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်
၃။ AA ကြောင့် ရခိုင်၏ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား မပျက်စီးနိုင်ဟု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ပြော
၄။ နှစ်ပတ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာစစ်တပ် နှင့် KIA တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား
၅။ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် တိုင်းရင်းအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နော်အုန်းလှ ရန်ကုန်ကရင့်ရေးရာ ဝင်ပြိုင်မည်
၆။ လာမည့် လွှတ်တော်တွင် ၅၈ နေရာ ရရှိမည်ဟု SNDP ခန့်မှန်း
၇။ ကွတ်ခိုင် ရွာသား ၅ ဦး တပ်မတော်မှ လမ်းပြ အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွား
၈။ သခင်စစ်ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှု တရားလိုသက်သေ ရဲစခန်း၏ထွက်ဆိုမှုကို အားရကျေနပ်မှု မရှိဟုဆို
၉။ အမ်းမြို့ ချင်းဒုက္ခသည် တစ်ထောင်ကျော် ဆန်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်
၁၀။ နောင်ချို ဂုတ်တွင်း ကားတစီး ချောက်ထဲကျ ၃ ဦးသေ
၁၁။ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်မှုကြောင့် လီဒိုလမ်းမပေါ်ကျေးရွာ ၂ ခုအငြင်းပွားဖွယ်ရှိနေ
၁၂။ မူးယစ်ဆေးဝါးပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် ထားစရာနေရာလုံလောက်မှုမရှိတော့ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ သထုံခရိုင် တာဝန်ရှိသူ ပြော
၁၃။ ကိုဗစ် လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်နေသည့် RCSS/SSA ကို အာဏာပိုင်များ တားမြစ်
၁၄။ ကျောက်ဖြူတွင် ထွေအုပ်ဝန်ထမ်း ၁ ဦးအသတ်ခံရ
၁၅။ လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း ပုတ်ပွနေသည့် အမျိုးသမီးအလောင်း ၂ လောင်းတွေ့
၁၆။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်လိုသူများအတွက် ဆန္ဒပြုလွှာများ KPP စတင်တောင်းယူ
၁၇။ မြန်မာအလံ ဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည့် ချင်းရွှေဟော်တွင် နယ်နမိတ် ပြန်တိုင်းဖို့ တရုတ်နှင့် သဘောတူညီမှု ရ
၁၈။ မူးယစ်သံသယ တပ်ရင်းမှူးကို ရဲထံအစစ်ခံရန် အစိုးရအသိပေးမှု DKBA မတုံ့ပြန်
၁၉။ တာလောကြီးကျေးရွာ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးမြေနေရာ ဖျက်စီးခံရမှု ပြည်နယ်အစိုးရ စုံစမ်းနေ
၂၀။ ခေါနူးစုမ် အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်များ စည်းကမ်းမဲ့ လွှတ်ခြင်းကို အရေးယူပေးရန် တောင်းဆို
၂၁။ ဂျပန်စ်ကျန်ပစ္စည်း စမ်းသပ်တူးဖော်ခဲ့ပြီးနောက် ချန်ထားရှိသော ရေကန်တွင် ၄ လောင်းပြိုင် ရေနစ်သေဆုံး
၂၂။ မြဝတီမြို့ ညမထွက်ရအမိန့် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ထိ တိုးမြှင့်ထားပြီး ၂လအတွင်း အမိန့်ချိုးဖောက်သူ ၈၀၀ ကျော်ဖမ်း မိ
၂၃။ လယ်သမားများအတွက် COVID 19 ကာလအထူးချေးငွေ စတင်ထုတ်ပေးသွားမည်
၂၄။ တောင်ကုတ်မြို့နှင့် ငါးမိုင်ခန့်အကွာတွင် အင်အားရစ်(ခ်)တာစကေး ၅.ဝ အဆင့်ရှိ မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးချယ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် စိတ်ကြိုက်ရွေး ချယ် စေမှာဖြစ်ပြီး မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ဗဟိုမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ကျန်ရစ်က ပြောကြားသည်။“မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ဖို့က မိမိတို့မြို့နယ်ကော်မတီတွေအပေါ်မှာပဲ အဓိက မူတည်ပါတယ်၊ ရွေးချယ်မှုအခွင့်အာဏာတွေ မြို့နယ်ကိုအပြည့်အပ်နှင်းပေးထားပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ဗဟိုအဆင့်ရွေးချယ် ရေးအဖွဲ့ကနေ မြို့နယ်တွေကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ကိုယ့်မြို့နယ် ကသာ ရွေးချယ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ” ဟု နိုင်ကျန်ရစ်က ဆိုသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဥက္ကဌ နိုင်တင်အောင်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဝင်များဖြစ်ကြသော နိုင်ကျန်ရစ်၊ နိုင်မွန်ရာဇာနှင့် နိုင်အောင်မွန် တို့ပါဝင်သည့် ဗဟိုအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး မဟာဗျူဟာ နှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့(ဇွန် ၁၆) တွင် သံဖြူဇရပ်မြို့၌ မြို့နယ် MUP ပါတီကော်မတီဝင် ၁၀ဝ ခန့်အား လာ ရောက်တွေ့ဆုံ၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူ ပါတီဝင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပါတီရုံးအသီးသီးသို့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထား၍ သတ်မှတ်လျှောက် လွှာပုံစံဖြင့် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဆင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က မိမိတို့ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများကိုရွေးချယ်၍ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပါတီဗဟိုဌာနချုပ် စာရင်းပေးပို့ရမည်ဟု အသိပေး ထားသည်။ MUP ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် ၁၉ ချက်ရှိသည့်အနက် အဓိကအားဖြင့် ဒေသခံ (သို့မဟုတ်) ဒေသတွင်းနေထိုင်သူ (သို့မဟုတ်) ဇာတိမွေးရပ်မြေမှ ပါတီဝင်ဖြစ်ရမည်ဟု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည် အချင်း (Criteria of Candidate) သတ်မှတ်ချက်တွင် ဦးစားပေး ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်အတွင်း မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP, မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ AMDP, အမျိုးသမီးပါတီ(မွန်)နှင့် မွန်အမျိုးသား တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသဖြင့် မွန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အချင်းချင်းထိပ်တိုက်ဖြစ်ကုန်ကြပြီး NLD ကိုယ်စားလှယ်များက မဲဆန္ဒနယ်မြေအားလုံးတွင် အပြတ်အသပ် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ယခုအခါ မွန်အင်အားစုအားလုံး ပြန်လည်ပေါင်းစည်းထားသော မွန်ညီညွတ် ရေးပါတီ၏ တစ်ခုတည်းသော အလံတော်အောက်တွင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ကြမည့် မွန်အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ မဲဆန္ဒနေရာအတော်များများတွင် အောင်ပွဲဆင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/16/%e1%80%99%e1%80%bc%e1
လွန်ခဲ့သည့် ၂၃ နှစ်က သျှမ်းပြည် အလယ်ပိုင်းတွင် အစုလုံအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရသည့် နေ့ကို သတိရ အောက်မေ့စေရန် အတွက် ဇွန် ၁၆ ရက်ကို သျှမ်းအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း CSSU ကထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၁၉၉၆ မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အတွင်းဖြတ်လေးဖြတ်စီမံကိန်းဖြင့် အစိုးရတပ်မတော်မှ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ကျေးလက်လူထုအား အတင်းအဓမ္မ နေရပ်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းမှု၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု၊ အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်က သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်အတွင်း အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးငယ်အပါ အဝင် ကျေးလက်ပြည်သူ ၅၆ ဦးကို သတ်ဖြတ်မှုလုပ်ခဲ့သည့်ရက်ကို ဝမ်းနည်းသတိရအောက်မေ့သည့်အနေဖြင့် သျှမ်းအမျိုး သားလူ့အခွင့်အရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီက ယနေ့ ဇွန် ၁၆ ရက်စွဲ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
သျှမ်းအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးနေ့ သတ်မှတ်လိုက်သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး CSSU ၏ အတွင်းရေးမှူး စိုင်းဆိုင်မုဒ် က “လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်က စစ်တပ်က သျှမ်းပြည်သားတွေအပေါ်လူ့အခွင့်အရေး ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကို ပြန်သတိရအောင်၊ လူ ငယ်တွေကို သမိုင်းကြောင်းသိအောင်၊ နောက်အဲဒီအချိန်က သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကို သတိရအောက်မေ့ဖို့ပါ”ဟု သျှမ်းသံ တော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၂၃ နှစ်ကအတိုင်း သမိုင်းဖြစ်ရပ်ဆိုးများထပ်မံ မပေါ်ပေါက်စေဘဲ ငြိမ်းချမ်း ရေး လျင်မြန်စွာဖြစ်ထွန်းရန်၊ ကျူးကျော်စော်ကားသူများ၏ အပြစ်ကြွေးအား ဆေးကြောပေးရာရောက်စေရန်၊ မတရားကျူး လွန်ခံခဲ့ရသည့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့၏ မိသားစုဝင်းများ အားနှစ်သိမ့်ကုစားပေးရာရောက်စေရန်နှင့် သေဆုံးသွားသည့် အပြစ် မဲ့ပြည်သူတို့အား အောက်မေ့သတိရသည့်အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ကာ ဇွန် ၁၆ ရက်ကို သျှမ်းအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း CSSU ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ စစ်ရာဇာဝတ်မှုမြောက်သည့် ကျူးလွန်မှုများကို အဆိုးရွားဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည့် မြို့နယ်ပေါင်း ၁၁ မြို့နယ်၊ ရွာပေါင်း ၁၄၀ဝ ကျော် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး၊ အမျိုးသမီးပေါင်း ၆၀ဝ ကျော် လိင်အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရ သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေဖြင့် သျှမ်းပြည်သူများအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်ကို ယနေ့ထိတိုင် အရေးယူဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိသေးသည့်အပြင် ဆက်လက်ပြီးကျူးလွန်နေဆဲဟု သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွဆောင်ရွက်သူများကပြောဆိုသည်။
၁၉၉၆-၁၉၉၈ ကာလတွင် သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ၁၅ မြို့နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရမှ နယ်မြေ ရှင်းလင်းမှုကြောင့် ကျေး လက်ပြည်သူ ၄ သိန်းကျော် နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း အဓမ္မပြုကျင့်ခံရခြင်းသည် ယနေ့ တိုင် တရားမျှတမှု မရရှိသေးကြောင်းလည်း သျှမ်းလူမှုအသင်းများက ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ဇွန် ၁၆ ရက်ကိုသျှမ်းလူမှု အဖွဲ့အစည်းများက နေရာဒေသအနှံ့တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၃ နှစ်တွင် စစ်တပ်ကျူးလွန်မှုကြောင့် သေဆုံး သွားသူများအတွက် ဝမ်းနည်းခြင်း သတိရအောက်မေ့ခြင်းအနေဖြင့် အလှူဒါနများလည်း ပြုလုပ်ပေးကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.o rg/archives/17118
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရက္ခိုင့် စစ်တပ် (AA) ၏ တိုက်ခိုက်နေမှုများက အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားများ ပျက်စီးသွားနိုင်သည် အထိ စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစိုးရ၏ စတုတ္ထ ၁ နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနမှ ရှင်းလင်းစဉ် ယင်းဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်သန်း တို့က အထက်ပါ အတိုင်း ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။“ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း သူ့နယ်မြေဒေသအတွက် သူလည်းပဲအေးချမ်းဖို့အတွက် ဒီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ သူလည်းပဲ အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်နေတယ်”ဟု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်သန်းက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအပြီးတွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
AA အဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစား ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် အစားထိုးမည်ဟု ကြွေး ကြော်ထားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အစိုးရနှင့်တပ်မတော်ကို အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားရန်ပြီးခဲ့သည့် မေ ၂၉ ရက်နေ့က သဘော ထား ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ AA အဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားပျက်ပြားစေရန် အတွက် ရဲစခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မြောက်ဦး၊ မြေပုံ၊ မင်းပြားနှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်များတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်က ပြောသည်။
ဦးတင်မြင့်က“အုပ်ချုပ်ရေးပျက်ပြားအောင်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ဖမ်းတယ်။ သတ်တယ်။ စခန်းတွေကို တိုက်တယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးတယ်။ ခေါ်ယူနှိပ်စက်တယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရက သမ္မတရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို ပြန်လည်တည် ဆောက်နေပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အစိုးရနှင့် AA အဖွဲ့တို့ အားပြိုင်နေသည့် သဘောဖြစ်နေပြီး AA အဖွဲ့ကလည်း ၎င်းတို့၏ အာဏာထူထောင်နိုင်ရန် Arakan People Authority (APA) ဟုခေါ်သည့် ရခိုင်ပြည်သူ့အာဏာ ပိုင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကြိုးစားနေကြောင်း ရခိုင်အရေးလေ့လာသူ ဦးမောင်မောင်စိုး ကပြောသည်။“ပြောရရင်တော့ ၂ ဖက် စလုံးက အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အပြိုင်ကြိုးစားနေတဲ့ကာလပေါ့။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူး တွေက ဖမ်းဆီးခံရလို့ နုတ်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရရဲ့ယန္တရားကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုပြီး အစိုးရကလည်း လုံးပန်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ နည်းနည်းတော့အားပြိုင်နေတဲ့ကာလလို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်”ဟု ၎င်း ကသုံးသပ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် AA အဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားနှင့် အစားထိုးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရဲစခန်း၊ ရဲကင်း များကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။“တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို တိုက်ခိုက်တာဟာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို ပျက်ပြား အောင်လုပ်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ထိရောက်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ် လိုနေပြီလို့ ပြောတာ”ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြော သည်။ မနေ့က နေပြည်တော်တွင် သတင်းထောက်များက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဝင်ရောက်နိုင်သလားဆိုသည့် မေးခွန်းကို အစိုးရအဖွဲ့ရုံးညွှန်ချုပ် ဦးမြင့်သန်းက ယင်းအခြေအနေအထိ စိုးရိမ်စရာ မလိုကြောင်း ပြန်လည်တုန့်ပြန်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/16/224725.html
မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကြား နှစ်ပတ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲသည် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် ဇွန်လ(၁၇)၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့ အနောက်မြောက်ဘက် KIA တပ်မဟာ (၄) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၈) နယ်မြေ Kaleng (ကာလိုင်) ကျေးရွာ အုပ်စု Nawng Maw Bum (နောင်မော့တောင်)သို့ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများ စစ်ဆင်လှုပ်ရှားလာသောကြောင့် KIA ဘက်က ခုခံယင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရကြောင်း KIA တပ်မဟာ (၄) အရာရှိတစ်ဦး ယခုလို အတည်ပြုပြောပါသည်။ “မြန်မာစစ် တပ် ထိုးစစ်ဆင်လာတာကတော့ သုံး၊ လေးရက်လောက်ရှိပြီ၊ သုံးနေရာကနေ မိမိသို့ စခန်းဆီ တက်လာတာပါ။ တပ်မ (၈၈) နဲ့ တခြားတပ်ရင်းတွေ ပူးပေါင်းတဲ့ စစ်ကြောင်းတွေ စုစုပေါင်း အင်အား ၄၀၀ လောက်ရှိမယ်”ဟု သူက ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ပြောပါသည်။ ယခုတိုက်ပွဲသည် KIA တပ်ရင်း (၈) လက်အောက် Kaleng တိုက်နယ်ရုံးကို လုံခြုံရေးပေး သော KIA အထူးလှုပ်ရှားရေး တပ်ရင်း (Mobile Battalion) (၂၉) နှင့် ‘နယ်မြေရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်’ဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်လာ သော မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အထက် KIA အရာရှိက ဆက်ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ကျော်မှာလည်း မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်း KIA တပ်မဟာ (၆) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၉) အခြေစိုက် စခန်း Htan Hpa Bum (ထန်းဖါတောင်) ကို မြန်မာစစ်တပ် တပ်မ (၈၈) နှင့် တပ်မ (၉၉) ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းမှ ဇွန်လ (၆) ရက် မှ (၇) ရက်ထိနှစ်ရက်ကြာ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလ တပ်မတော် က ၎င်းတို့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ရခိုင် AA အဖွဲ့နှင့်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲမှလွှဲပြီး ကျန် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာကို မေလ (၁၀)ရက်မှ သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်ထိ စစ်ပွဲ ရပ်ထားကြောင်း ကြေညာထားချိန် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မှာ KIA အဖွဲ့ကို ‘နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ခေါင်းစဉ်’သတ်ကာ လိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/18/%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%85%e1%80%b9%e1
၅။ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် တိုင်းရင်းအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နော်အုန်းလှ ရန်ကုန်ကရင့်ရေး ရာ ဝင်ပြိုင်မည်
ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နော်အုန်းလှ သည် လာမည့်ပါတီစုံ အထွေ ထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာကို ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ(UNDP) ကိုယ်စားပြု ဝင်ပြိုင်သွားမည်ဟု သူမက ကေအိုင်စီသို့ ဇွန် ၁၇ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြောသည်။
“ ပါတီက တာဝန်ပေးလို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ရေးရာ မဲဆန္ဒနယ် ဝင်ပြိုင်မယ်။ ကရင်လူမျိုးတွေ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရဖို့၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိဖို့ လုပ်ဆောင်ချင်လို့ အခုလို ဝင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု နော်အုန်းလှက ပြောသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတွင် စတင်ပါဝင်ပြီးနောက် နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်လာသူ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) တွင် ရပ်ကျေးအဆင့်မှ ဗဟိုအမျိုးသမီးအဆင့်ထိ တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ရာ ပါတီစည်းကမ်းနှင့် မညီသည့် အတွက် NLD က ပါတီဝင်အဖြစ်မှ သူမအား ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူမသည် နိုင်ငံရေးလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်ကတည်းက ၂၁ ကြိမ် အဖမ်းခံခဲ့ရဖူးပြီး ထောင် ၁၁ ကြိမ် ကျခံရထား သည်။ ထိုထဲတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံရှေ့၌ ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ပြုလုပ် သည့်အတွက် ထောင် ၁၅ ရက် ကျခဲ့မှုဖြစ်စဉ်တွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားများက သူမအပေါ် အားပေးဝန်းရံမှုများစွာရရှိခဲ့ သည်။ ထို့အပြင် သူမသည် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၉ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ် သည့် UNDP ပါတီတည်ထောင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါတီနိုင်ငံရေးပြန်လုပ်မည်ဟု ကေအိုင်စီသို့ သီးခြား ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
၎င်းက“လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်က ပါတီပြင်ပနိုင်ငံရေးနဲ့လုပ်တဲ့အခါ မလွယ်ကူတာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ပါတီနိုင်ငံရေးပြန်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်။ ပူးပေါင်းမဲ့ပါတီကတော့ အခု ၉၀ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့က တည်ထောင်မယ့်ပါတီမှ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်”ဟု ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၅ ရက်နေ့တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြော သည်။ လက်ရှိ နော်အုန်းလှသည် ၁၉၉၀ အမတ်များ တည်ထောင်ထားသည့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမို ကရေစီပါတီ(UNDP)တွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူထားသူ ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1% 80%92%e1%80%ae%e1%80%99% e1%80%ad%e1%80%af%e1%80
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ( SNDP) အနေဖြင့် လွှတ်တော်တွင် ၅၈ နေရာခန့်မှန်းထားကြောင်း SNDP ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း က ပြောကြားလိုက်သည်။
“ကျနော်တို့ အရင်က ၅၈ ယောက် နိုင်ဖူးတယ်လေ။ အခုလဲ အဲ့လောက် မှန်းထားတာပေါ့”ဟု ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း ကပြော သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် SNDP ပါတီသည် လွှတ်တော်တွင် ၅၈ နေရာရရှိခဲ့ပြီး၊ ဝန်ကြီးနေရာ ၆ ဦးရခဲ့သဖြင့် အတွေ့အကြုံများစွာရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ခံပြီး အနိုင်ရမည်ဆိုပါက သျှမ်းပြည်အစိုးရ ဖြစ်နိုင် ကြောင်းလည်း ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်သည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် SNDP အနေဖြင့် သျှမ်းပြည်နေရာအနှံ့အပြင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း စုစုပေါင်းမြို့နယ် ၃၀ မြို့နယ်တွင် ဝင်ပြိုင်သွားမည်ဟု ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ပြောကြားသည်။“ မြို့နယ် ၃၀ လောက် ဝင်ပြိုင်မယ်။ သျှမ်းအရှေ့၊ သျှမ်းတောင်၊ သျှမ်းမြောက် နောက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် သျှမ်းပြည် ပြင်ပကတော့ ကချင်ပဲ။ မန္တလေးတိုင်းက သျှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာလဲ ဝင်ပြိုင်မယ်”ဟု ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း က ထပ်လောင်းပြောသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီး နှင့် လူငယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ပါတီ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။“ အမျိုးသမီးနဲ့ လူငယ်က ၂၀၊၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပါမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဝင်မပြိုင်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့လူငယ်တွေကို နေရာပေး တယ်”ဟု ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ဆိုသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် SNDP အနေဖြင့် သျှမ်းပြည်တွင် လွှတ်တော်တနေရာ တွင်သာ ရရှိခဲ့သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17161
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ယနေ့ မနက် တိုက်ပွဲ ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး ရွာသား ၅ ဦးကို တပ်မတော်မှ လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ အစိုးရတပ်မတော်မှလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသည့် အမျိုးသား ၅ ဦးထဲမှ ၃ ဦးသည် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် နောင်ဟွယ်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ပြီး ကျန် ၂ ဦးမှာ ကာလိုင်ဇွပ်အောင် စစ်ရှောင်စခန်းတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း ကွတ်ခိုင်ဒေသခံများပြောပြချက်အရသိရသည်။
“ နောင်ဟွယ် ရွာသား ၃ ဦးက တအာင်း(ပလောင်) လူမျိုးတွေပါ။ စစ်ရှောင်စခန်းက ၂ ဦးက ကချင်လူမျိုးတွေပါ။ လမ်းပြ အဖြစ်ခေါ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်”ဟု အစိုးရတပ်မတော်မှ ခေါ်ဆောင်သွားစဉ် မြင်တွေ့လိုက်သည့် ဒေသခံ အမျိုးသား တဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ရေးဋိပက္ခကြောင့် တောင်ယာအလုပ်သွားလုပ်ပြီး စစ်ရှောင် စခန်းသို့ပြန်လာသည့် အမျိုးသား ၂ ဦးကိုလည်း စစ်တပ်က ယနေ့မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“နောင်ဟွယ်ရွာသား ၃ ဦးကိုတော့ ရွာကနေခေါ်သွားတယ်။ စစ်ရှောင် အမျိုးသား ၂ ယောက်က တောင်ယာက နေပြန်လာတာ။ လမ်းမှာ တပ်မတော်နဲ့တွေ့တော့ လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်သွားတာ။ သူတို့တွေက အသက်က ၂၀-၃၀ ဝန်းကျင်ရှိ မယ်ထင်တယ်”ဟု တပ်မှ ခေါ်သွားစဉ်မြ င်တွေ့လိုက်သည့် အမျိုးသားတဦးက ပြန်ပြောပြသည်။
ယခုရက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ကာလိုင်၊ နောင်ဖန်းကျေးရွာနှင့် နမ့်ဖူးကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများသည် အစိုးရ တပ်မတော် နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA)တို့ ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ပြောပြချက် အရသိရသည်။ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများဆက်လက် ပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်း၊ ကိုဗစ် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း တပ်မတော်မှ တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ထားမည်ဟု ကြေညာခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲ များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်း ဆရာနောင်လတ်က ပြောသည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ယခုရက်ပိုင်း တပ်မတော်မှစစ်အင်အား ရာဂဏန်း ထပ်မံဖြည့်တင်းကာ ဒေသအတွင်း လှုပ်ရှားနေ ကြောင်း ဒေသခံများပြောပြချက်အရသိရသည်။ အဆိုပါ သတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ တပ်မတော် သတင်း မှန်ပြန်ကြားရေးဌာန နှင့် KIA ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖုန်းဆက်ခေါ်ဆိုခဲ့သော်လည်း မရရှိခဲ့ပေ။ https://burmese.shannews.o rg/archives/17166
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် မြစ်ကြီးနားသတင်းဂျာနယ် မှ သခင်စစ်ကုမ္မဏီကို တရားစွဲဆိုထားထားသည့်အမှု ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် တရားလိုသက်သေဖြစ်သော ရဲစခန်း၏ထွက်ဆိုချက်အပေါ် ကျေနပ်အားရမှုမရှိကြောင်း တရားလို သတင်းထောက် မွန်းမွန်းပန် ထံမှ သိရသည်။
“ဒီနေ့ရုံးချိန်းကို လုံးဝအားမရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အမှုစစ်ထွက်ဆိုတဲ့အချက်မှာ အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကဖမ်းထားတဲ့ အသံဖိုင် ကို အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာ မပေးခဲ့ဘဲနဲ့ နောက်ကျမှပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်နေတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျမတို့အဲနေ့ က သက်သေခံပစ္စည်းတွေကိုအပ်တယ်။ ရဲစခန်းကလက်မခံဘူး။ သူတို့ကပြောတာ နောက်မှအပ်ပါတဲ့။ ကျနော်တို့ခေါ်တဲ့ ချိန်မှ အပ်ရမယ်။ ခုအပ်လို့မရဘူးဆိုပြီး ခုမအပ်သေးနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်။ ပြီးတော့အဲနေ့ကလည်း အမှုကိုစောစောမဖွင့်ပေး ဘူး။ ကျေအေးဖို့ဘဲထပ်ခါထပ်ခါလာပြောနေတာ။ အဲချိန်ကျတော့ နေ့လည် ၁၁ နာရီကတည်းကနေ ည ၁၀ နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုလည်း တရားရုံးရောက်မှပြော ဒီမှာက အသေးစိတ်အချက်လက် တွေကို မရေးလည်းရတယ် မှတ်မိသလောက်ဘဲပြော အဲလိုတွေပြောတဲ့ချိန်ကျတော့ မပါနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိသွားတာ ပေ့ါနော်။ အဲအမှုဖြစ်တဲ့နေ့မှာ ကျမသတင်းတွေမှာ ဘယ်လိုဖြေထားတယ်။ အဲနေ့က ကျမအကျီ င်္ ကြယ်သီးက ဘယ်လိုပြုတ် ထားတယ် မပြုတ်ထားဘူးဆိုတာ အဲနေ့ကျမတို့ ရှေ့နေအပြင် တစ်ခြားသတင်းထောက်တွေလည်း အားလုံးတွေ့မှာပါ။ ခုက ကျမကဘဲ အဲဒီကြယ်သီးတွေကို စွဲဖြုတ်ထားတဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်။”ဟု မွန်းမွန်းပန် က ပြောသည်။
“သူ့ရဲ့ဥပဒေကြောင်းအရဆို အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို တရားလိုဘက်က စပေးကတည်းက ရဲတွေယူခဲ့ရမှပေါ့။ ယူဖို့လည်း ကျနော်တို့အကုန်လုံးက ပြောတယ်။ အဲဒါကိုသိမ်းပေးပါ ဒါအမှုအတွက် သက်သေခံပစ္စည်းဟုတ်တယ် စတိုင်ကတည်းက သိမ်းခိုင်းတာသူတို့က မသိမ်းဘူး။ အဲတော့ ဒီနေ့တရားရုံးမှာလာထွက်တဲ့ချိန်ကျတော့ မပေးပါဘူးဆိုပြီး လာထွက်ကြတာ။ အဲတော့ အမှုဖြစ်ပြီး တစ်ပတ် ဒါမှမဟုတ် ၁၄ရက်လောက်ကြာတဲ့ခါကျမှ ကျနော်တို့ကဘဲ အဲသက်သေခံပစ္စည်းကို ရဲကို အပ် တယ်ပေါ့။ အမှုဖြစ်ပြီးအဲလောက်ကြာမှအပ်တဲ့ပစ္စည်းက အစစ်အမှန်တစ်ကယ် အသံဖမ်းထားတာ ဟုတ်မဟုတ် အကျီ င်္ပြဲ တာကလည်း သူတို့ပြသာနာဖြစ်ခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စမှာ သံသယဖြစ်စရာ ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ”ဟု တရားလိုဘက်မှ ရှေ့နေဖြစ်သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းသိန်းက ပြောသည်။ ရဲစခန်းဘက်မှ လက်မခံခဲ့သည့် အဆိုပါ သက်သေခံပစ္စည်းသည် ရဲစခန်း၏ပေ့ါဆမှုသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်း၏အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး နစ်နာမှုမရှိစေရန် အကောင်း ဆုံးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ သခင်စစ်ကုမ္မဏီက မြစ်ကြီးနားသတင်းဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား ဂျာနယ်တွင်ပါရှိသည့် သတင်းတစ်ပုဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရန်အတွက်ဟုဆိုကာ မြစ်ကြီးနားသတင်းဂျာနယ်ရုံးမှ ဝိုင်းမော်မြို့ရှိ ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီရုံးခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီးနောက် အမျိုးသမီးသတင်းထောက်ဖြစ်သည့် မွန်းမွန်းပန်အား ခြိမ်း ခြောက်ပြောဆိုကာ ဂျာနယ်ဖြင့် ပါးရိုက်ခဲ့ပြီး သတင်းထောက် အဂျေအား ထိုင်ထတစ်သိန်းလုပ်ရန် ခြိမ်းခြောက်စေခဲ့သည့် အတွက် မြစ်ကြီးနား သတင်းဂျာနယ်မှ သခင်စစ်ကုမ္မဏီအား အသရေဖျက်မူ ပုဒ်မ ၅၀၀ ဖြင့် စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို အခြားတစ်ဦးဦးအား အသေရဖျက်မူ တစ်ခုခုကျူးလွန်လျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်ထိ ချမှတ် နိုင်သည့်အပြင် ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သောပုဒ်မဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ https://burmese.kac hinnews.com/2020/06/16/%e1%80%9e%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%ba%e1
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ် ဒလက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုက ရှမ်းကုန်းနဲ့ မင်္ဂလာဒုံရွာက ချင်းတိုင်းရင်းသား လူဦးရေတစ် ထောင်ကျော်ကို တပ်မတော်က ဆန်သယ်ယူခွင့်ကန့်သတ်ထားတာ ခြောက်လကျော်ပြီဖြစ်လို့ အဲဒီရွာတွေမှာ ဆန်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်နေပါတယ်။ ဆန်သယ်ခွင့် အပိတ်ခံထားရတာကြောင့် ချင်းတိုင်းရင်းသား တစ်ထောင်ကျော်ဟာ စားစရာဆန်မရှိဘဲ အရေးပေါ် ရိက္ခာလိုအပ်နေတယ်လို့ ချင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ (CHAT) က ဆလိုင်း ဝင်းမောင် က ပြောပါတယ်။ “ကျေးရွာကလူတွေက ပိတ်ဆို့ခံထားရတာ ကြာတဲ့အခါကျတော့ စားဖို့သောက်ဖို့က ဆန်တွေက မရှိတဲ့ အတိုင်းအတာကို ရောက်နေတယ်၊ ခုကရွာတွေမှာ ဆန်လည်းဝယ်လို့မရဘူး၊ အခုရွာတွေမှာ ငှက်ပျောသီးတွေ၊ အသီးအရွက်တွေ စားပြီးနေနေရတယ်ဗျ၊ ကျေးရွာအားလုံးနီးပါး ပိတ်ဆို့ခံထားရတယ်၊ အရေးပေါ်လိုအပ်နေတာကတော့ ရှမ်းကုန်းကျေးရွာနဲ့ မင်္ဂလာဒုံကျေးရွာ အဲမှာအဓိက လိုအပ်နေတယ်” ရှမ်းကုန်းကျေးရွာမှာ လူဦးရေ ၆၀ဝ ကျော်နဲ့ မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာမှာ လူဦးရေ ၅၀ဝ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဆလိုင်းဝင်းမောင်က ပြောပါတယ်။
ဒလက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ရွာ ၃၆ ရွာနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ရွာ ငါး ရွာလောက်ရှိပါတယ်။ ဒီကျေးရွာနှစ်ရွာကိုပဲ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရတာကြောင့် မြေပြင်အခြေအနေသိရပြီး အခြားကျေးရွာ တွေ အခြေအနေကိုတော့ အသေးစိတ် မသိရသေးဘူးလို့ CHAT အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ဒလက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုဟာ အမ်းမြို့ကို ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းနဲ့ သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီလဆန်းကစလို့ AA အဖွဲ့ကို ရိက္ခာရောက်သွားမှာ တားမြစ်တာဆိုတဲ့ တပ်မတော်ဘက်က အကြောင်းပြချက်နဲ့ ရိက္ခာသယ်ယူခွင့် နဲ့ သွားလာခွင့်တွေ ပိတ်ထားတာလို့ ဒေသခံ တွေကပြောပါတယ်။ ရိက္ခာအရေးပေါ် လိုအပ်နေတဲ့ ဒေသခံ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကို အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ချင်းအရပ်ဘက် အဖွဲ့တွေ ပြင်ဆင်နေ ကြပါတယ်။ ချင်း စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ အရေးပေါ်ကူညီရေးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီ RRCCI က ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ မိုင်နန်းဝေ ပြောသွားတာပါ။ ရွာတွေထဲက ချင်းလူငယ်တချို့ကတော့ ရန်ကုန်ကိုထွက်ပြေး ခိုလှုံနေတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ချင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်က ရိက္ခာသယ်ယူခွင့် ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူး ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမယ့် လက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူး။ AA နဲ့ တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ တွေကြောင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၉၀ဝ၀ ကျော်ရှိသလို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း ချင်းလူဦးရေ ခြောက်ထောင်ကျော် ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် မင်းပြား၊ အမ်း၊ မြေပုံနဲ့ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသား စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရှိပြီး အမ်းမြို့နယ်မှာတော့ အများဆုံးရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ https://www.rfa.org/burme se/news/urgent-food-supply-required-for-thousand-of-ann-refug ees-
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ် ဂုတ်တွင်း တွင် ယနေ့ မနက် ၃ နာရီ ကျော်က ခရီးသည် တင်ယာဉ် express ကား တစီး ချောက်ထဲသို့ ထိုးကျကာ ယာဉ်မောင်းတဦး နှင့် ခရီးသည် ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။“ယာဉ်မောင်းနဲ့အမျိုးသားတဦးကတော့ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ပွဲချင်းပြီးသေတယ်။ နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ ဆေးရုံ မှာဆုံးတယ်”ဟု သွားရောက်ကူညီခဲ့သည့် ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း (နောင်ပိန်) မှ ဦးနေအောင်က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ ခရီးသည်ယာဉ်တွင် ယာဉ်မောင်းအပါဝင် စုစုပေါင်း ၁၇ ဦး လိုက်ပါခဲ့ပြီး၊ ၃ ဦး
သေဆုံးကာ ၊ ၅ ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း၊ ကျန် သူများမှာ ဒဏ်ရာမပြင်းထန်ကြောင်းလည်း ဦးနေအောင် က ဆိုသည်။“ ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ ၅ ဦးကိုတော့ ကျနော်တို့အသင်းက ပြင်ဦးလွင် ဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျန် သူတွေကတော့ နောင်ချို ဆေးရုံမှာပါ”ဟု ဦးနေအောင် က ပြောသည်။ ထို ခရီးသည်ယာဉ် သည် မကွေးမြို့မှ လားရှိုးမြို့သို့သွားမည် မင်းသားကြီး express ကားဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်းအဆင်းတွင် ကားဘရိတ်ပေါက်မှုကြောင့် ရှေ့သို့ထိုးဆင်းသွားကြောင်း သွားရောက်ကူညီ သည့် လူမှုရေးအသင်းများကပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက နောင်ချိုမြို့နယ် ဂုတ်တွင်း တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်ကျချောင်းရေကြီးကာ ကားလမ်းများချော်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုရက်ပိုင်း ထို ဂုတ်တွင်းတွင် အတက်အဆင်း သတိထားပြီး မောင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း လည်း ကားသမားများ က ပြောသည်။ “ဒီရက်ပိုင်း မိုးတွေ အရမ်းရွာတယ်။ တောင်တက်တောင်ဆင်း ကားလမ်း တွေချော် တော့ သတိနဲ့မောင်းဖို့လိုတယ်။ ဂရုစိုက်မောင်းဖို့ လိုပါတယ်”ဟု ကားသမား တဦးဖြစ်သည့် စိုင်းလောဝ် က ပြောသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်ကျရေများ ယခင်ကထက် ပိုကျလာကြောင်း၊ လမ်းများချော်မှုကြောင်း ယခုရက်ပိုင်း ကားကြီး၊ ကားသေးများ သွားလာမှုခက်ခဲနေကြောင်း၊ လမ်းများသည် ယခင်ကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ကြောင်းလည်း ကားသမားများက ပြောသည်။ https://burmese.shannew s.org/archives/17134
၁၁။ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်မှုကြောင့် လီဒိုလမ်းမပေါ်ကျေးရွာ ၂ ခုအငြင်း ပွားဖွယ်ရှိနေ
အစိုးရ၏ ဟူးဟောင့်ချိုင့်ဝှမ်းဒေသ လီဒိုလမ်းမပေါ်ရှိ စံပြ ရွေ့ပြောင်းကျေးရွာသစ်အတွက် မြေယာအသစ်ဖော်ထုတ်မှုကို အစိုးရက နှောင်းမီကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ကျေးရွာ ၂ ခုကြား ပဠိပက္ခဖြစ်လာမည့်အခြေအနေရှိနေသဖြင့် အမြန်ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုနေကြသည်။ ဖားကန့်မြို့နယ် မြေယာဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီက စံပြကျေးရွာအတွက် မြေဧက ၂၀၀ ကျော်ကို ၎င်းကျေးရွာနှင့် မိုင် ၂၀ ကျော်ကွာဝေးသော နှောင်းမီကျေးရွာတွင် လွန်ခဲ့သည့်မတ်လ ကတည်းက စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ရာ နှောင်းမီဒေသခံများက ကန့်ကွက်နေဆဲဖြစ်သည်။
လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ပေးရန် နှောင်းမှီကျေးရွာဒေသခံမှ တောင်းဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း စံပြကျေးရွာကသာ တောင်းဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ညွန်ကြားစာတွင် ‘နှောင်းမီစံပြကျေးရွာ’တွင်ဟု ကျေးရွာ ၂ ခုကိုရောထွေးစွာ ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် ကျေးရွာ ၂ ခုကြား အငြင်းပွားဖွယ် အခြေအနေဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ “ညွန်ကြားစာမှာက ‘နှောင်းမှီစံပြ ကျေးရွာ’လို့ စာထွက်လာတယ်။ စာထဲမှာကိုက မြေနေရာရှာခိုင်းတာပေါ့။ ညွန်ကြားစာက ဝန်ကြီးရုံးကနေ မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ရုံးကထွက်လာတာပေါ့။ အဲ့မှတဆင့် ကျနော်တို့ကို ကွင်းဆင်းခိုင်းတယ်။ နောက်စံပြ ကျေးရွာအနီးတဝိုက်မှာက မြေနေရာ လွတ်တာမရှိဘူးလေ။ စာမှာကိုက နှောင်းမီပါနေတော့ အဲ့ဒီကို ပြန်ရှာတာပေါ့။ အဲ့မှာက မြေလွတ်မြေလပ်ရှိနေ တော့ တင်ပေးလိုက်တာပေါ့။ လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း စံပြတောင်သူအတွက်ဖြစ်တယ်လို့၊ နောက် နှောင်းမှီတောင်သူ တွေ အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ၂ ဦး စလုံးကို တိတိကျကျ ချမှတ်ပေးတာမရှိသေးပါဘူး”ဟု ဖားကန့်မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးမှူး ဦးဇော်ဇော်လင်းက ပြောဆိုသည်။
လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ချိန် ဒေသခံများအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးမည့်အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နှောင်းမီဒေသခံ ဦးဆိုင်းအောင် က သတင်းဌာန KNG ကိုပြောသည်။
“ဒီမှာလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ မြို့နယ်ကနေ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်။ ကျနော် တို့ ဒေသခံတွေက ဒီနေရာမှာ မလုပ်ဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့တာရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေသခံတွေက မြေလွတ်မြေလပ် လျှောက်ထားတဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က နိုင်ငံတော်ရံပုံငွေကျထားတဲ့အတွက် လုပ်ရင်လည်းဒေသခံတွေ အတွက်သာ ဖြစ်လိုပြောခဲ့တယ်။ အခုက လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်တာကလည်း ပြီးခါနီးတော့ ကျေးရွာသားတွေအတွက် မဟုတ်ဘဲ စံပြကျေးရွာဘက်က တောင်သူ တွေ အတွက်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောလာတယ်။ အဲ့တော့ အခုဖော်ထုတ် ထားတဲ့ မြေယာတွေက ခွဲဝယ်ယူလို့လဲမရ ပြဿနာတက်နေတာပေါ့” ဟုပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး လီဆူတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးအားတီယောဟန်က “ကျနော်တို့ သိထားသလောက်ပြော ရမယ်ဆိုရင် စံပြကျေးရွာနဲ့ နှောင်မီဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ ဘာကြောင့် ပြသနာဖြစ်လာရသလဲဆိုတော့ အောက်ခြေမှာ အစိုးရ က လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ပေးဖို့ တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့သူရဲ့ ပြတ်သားမှုမရှိတဲ့တစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း နေရာ ကြိုတင်ရှာထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ပြည်သူတောင်းခံထားတဲ့ဟာကို ဘတ်ဂျက် ချပေးလိုက်တယ်။ အချိန်အခါအရဆို မသုံးလို့မရ တော့ဘူး။ အဲ့တော့ ချပေးတဲ့အခါမှ ဟိုနေရာ ရှာလိုက်နဲ့ ပတ်ချာလည်သွားတဲ့အခါ နောက်ဆုံး နှောင်းမှီမှာ သွားဖော်တယ်။ အဲ့မှာမဖော်ခင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ဒေသခံတွေကို သေချာညိနှိုင်းတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်တယ်။ အခုက မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ လီဒိုလမ်းကျေးရွာများတွင် ဒေသခံများနှင့် ယုဇနကုမ္ပဏီတို့ကြား မြေယာပြဿနာဖြစ်နေရာမှ ယခု အချိန်တွင် အစိုးရ၏ညွန်ကြားချက်ကြောင့် ကျေးရွာ ၂ ခုကြားမြေယာအငြင်းပွားမှု ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေသည်ဟု ဒေသခံများ က ပြောသည်။ https://burmese.k achinnews.com/2020/06/17/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e
၁၂။ မူးယစ်ဆေးဝါးပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် ထားစရာနေရာလုံလောက်မှုမရှိတော့ဟု မွန်ြ ပည်သစ်ပါတီ သထုံခရိုင် တာဝန်ရှိသူ ပြော
မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရယ်ကို အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ဖမ်းဆီးအရေးယူလျက်ရှိရာ ၎င်း၏ ထိန်းချုပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သော သထုံခရိုင်အတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရားခံများအတွက် ထိန်းသိမ်းထားစရာနေရာလုံ လောက်မှုမရှိတော့ ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီသထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မွန်ပြည်သစ်သတင်းစဉ် Online မှ မွန်ဘာသာဖြင့် ဖြန့်ချိခဲ့သော “မွန်အမျိုးသားအန္တရယ် မူးယစ်ဆေးဝါး” Documentary အပိုင်း(၂)တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် သုံးစွဲသူများအားဖမ်းဆီးအရေးယူထားမှုအပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ သထုံခရိုင်မှ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာရကြောင်း ခရိုင်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် နိုင်ဇော်မင်းဦးက ပြောဆိုထားသည်။ နိုင်ဇော်မင်းဦးက “လက်ကြီးသမားတွေကိုပဲ ဖမ်းချင်ပါတယ်၊ လူများများဖမ်းမိရင် ကျနော်တို့ဆီမှာ ထိန်းသိမ်းဖို့နေရာအတွက် အခက်အခဲ တော်တော်လေးရှိလာတယ်၊ ဖမ်းဆီးမိလာရင် နေစရာနေရာအတွက် အခက်အခဲဖြစ်လာရတာကတစ်မျိုး သူတို့ စားရေးသောက်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်း ပါတီအနေနဲ့တာဝန်ကြီးလာတဲ့အတွက် တခါတလေမှာ အဖမ်းအဆီးတွေမလုပ်ဖို့ တားထားလိုက်ရတယ် သုံးစွဲတဲ့အဆင့်လောက်ပဲဆိုရင် ဖမ်းမလာပါနဲ့တော့လို့၊ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် ဖမ်းလာပြီးဆိုရင် အိပ်ဖို့ နေရာမပေးနိုင်ဘူး ထားဖို့အခန်းနေရာလည်းမရှိဘူး နောက်ပြီး သူတို့ကို ကျွေးမွေးတဲ့ကိစ္စကလည်း တာဝန်တော်တော်ကြီး လေးလာတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အထူးအဖြင့် ကျေးရွာများတွင် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက် ခလေးလူငယ်များ သုံးစွဲနေကြသည်ကို ကျေးရွာအကြီးအကဲများ ပြောဆို ဆုံးမသော်လည်း ထိရောက်မှုမရှိသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အရေးယူပေးဆောင်ရွက်ပေးစေလို ကြောင်း အလားတူ ကော့မိတ်ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ နိုင်စိုးခိုင်က ပြောထားသည်။
နိုင်စိုးခိုင်က “အများအားဖြင့်တော့ မိဘတွေ က ရပ်ရွာမှာမရှိကြဘူး၊ အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ နေကြတာများတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေ အဖြစ်များလာတာလို့လည်း ဆိုနိုင်တယ်၊ ခလေးတွေ စာရိတ္တချို့ယွင်းလာတယ်၊ ပညာရေးအပိုင်းမှာလည်း ထိခိုက်လာ တယ်၊ ဒီမှာက တော်တော်များဆိုမှ တော်တော်များများ ကို ဖြစ်နေတာ အဲဒါကြောင့် ထိရောက်ပြတ်သားစွာ အရေးယူစေ ချင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ “မွန်အမျိုးသားအန္တရယ် မူးယစ်ဆေးဝါး” Documentary အပိုင်း(၂) တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ သထုံခရိုင်အတွင်း မူယစ်ဆေးဝါးပြစ်မှုဖြင့် အရေးယူခံထားရသူများ၏ နောက်ခံပုံရိပ်များ၊ အင်တာဗျူးများနှင့်အတူ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် နောက်ဆုံးရလိုက်သည့်သင်ခန်းစာမှာ “နောင်တ”ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အလားတူ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ မော်လမြိုင်ခရိုင်နှင့် ထားဝယ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသများတွင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးစွဲသူများ ပြန် လည်ကုသရေး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရားခံများ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်လုံခြုံသောနေရာနှင့် စားနပ်ရိက္ခာများရရှိရေးအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဖြစ်လာသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/16/%e1%80%99% e1%80 %b0%e1%8 0%b8%e1%80%9a%e1%
သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း လင်းခေးခရိုင် မိုးနဲမြို့နယ်အတွင်း RCSS/SSA ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တားမြစ်ပိတ်ပင်ကြောင်းစုံစမ်းသိရသည်။
ဇွန် ၁၈ ရက် မနက် ၉ နာရီက သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) ၏ ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းများက မိုးနဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင် ရွက်နေစဉ် လွယ်ဝပ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး တို့က လာရောက်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA ဘက်က ဆိုပါသည်။“ဒီနေ့မနက် ကျနော်တို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဖွဲ့ကို လာပြီးဟန့်တားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော့အထင်တော့ ကျနော်တို့ RCSS/SSA ကို နာမည် မရစေချင်တဲ့သဘောလားမသိဘူး”ဟု RCSS/SSA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။
RCSS/SSA ဆေးဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် ကျိုင်းတောင်းမြို့အသွားလမ်း တနေရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာရှိ၊ မရှိစစ်ဆေး ခြင်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်နည်း အသိပညာဟောပြောပေးခြင်း ဆောင်ရွက်နေစဉ် လွယ်ဝပ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ၂ ဦး တို့က ကားဖြင့်လာပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ကိုဗစ်-၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ် ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA ၏သတင်းမီဒီယာ ဝက်ဆိုဒ်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အမိန့်မရပါက ထို နေရာတွင် ကိုဗစ် -၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် နှင့် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရန် ပြောဆို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ရာ RCSS/SSA ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ထိုနေရာမှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရကြောင်းလည်း RCSS/SSA ၏ ဝက်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဇွန် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ထိန်းချုပ်ရေး ၊ကုသရေး နှင့် ပတ်သတ်ပြီး RCSS/SSA နှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့ သည် Vedio Conferencing အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ ၇ ရက် တွင်လည်း သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း မိုင်းပန်မြို့နယ် တွင် RCSS/SSA ၏ ဆေးဝန်ထမ်းများကို အစိုးရတပ်မတော်က တားမြစ်ခဲ့ပြီး၊ RCSS/SSA ၏ ထောက်ပံ့မှုကို ယူပါက ဒေသခံပြည်သူများကို ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဟုလည်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ https://bu rmese.shannews.org/archives/17173
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ စာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်သူ အသက် ၄၀ နှစ်ခန့်ရှိ ဦးစိုးမင်း မှာ အမည်မသိ လူတစုက ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် အသတ်ခံရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့မ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး ကျော်ဇောက “ကျနော်တို့ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ တောင်ရှည်ကျေးရွာသို့ သွားတဲ့ ကားလမ်းမဘေးမှာ လူတယောက် သေနေတယ်ဆိုတာ သတင်းရလို့ သွားကြည့်တယ်။ ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဆေးရုံပို့ပြီး စစ်ဆေးတဲ့အခါ စိုင်ခြုံကျေးရွာက ထွေအုပ်စာရေး ကိုစိုးမင်းထွန်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရတာ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ အသတ်ခံရသူ ဦးစိုးမင်းထွန်းမှာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် စိုင်ခြုံကျေးရွာမှ ရပ်/ကျေး စာရေးတဦး ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မိသားစုနှင့်အတူ နေအိမ်၌ အိပ်နေစဉ် အမည်မသိ လူတစုမှ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး နောက်နေ့ နံနက် လေယာဉ်ကွင်း အနီးရှိတောင်ရှည်ကျေးရွာသွားသည့် ကားလမ်းဘေးတွင် ၎င်း၏ အလောင်းအား တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။
“သူ့မိန်းမက ပြောတာ အဲဒီည ၁၂ နာရီလောက်မှာ အမည်မသိ လူတစု ရောက်လာပြီး အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းခေါ်သွား တယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက်နေ့ မနက်မှာ ဒဏ်ရာနဲ့ သူ့အလောင်းတွေ့တာ”ဟု စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး ကျော်ဇောက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ အသတ်ခံရသည့် ဦးစိုးမင်းထွန်း၏ အလောင်းအား စစ်ဆေးရာ ဦးခေါင်း၊ ဝမ်းဗိုက်၊ ဝဲဘက် လက်ဖျံတို့တွင် ညိုမဲ ဒဏ်ရာအသီးသီး ရရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့မရဲစခန်းမှသိရသည်။ အသတ်ခံရသည့် အကြောင်း ရင်းနှင့်ကျူးလွန်သည့်တရားခံများကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ယခုတိုင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ အဆိုပါ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစိုးမင်းထွန်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မဝေသန်းက တရားလိုလုပ် တိုင်တန်းပြီး ကျောက်ဖြူမြို့မ ရဲစခန်းတွင် ပ/၂၁၅ / ၂၀၂၀ ၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂ / ၄၃ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ တရားခံဖမ်းဆီးနိုင်ရေး ရှာဖွေစုံစမ်းလျှက် ရှိကြောင်းသိရသည်။ https:/ /burma.irrawaddy.com/news/2020/06/18/224902.html
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ် မတ်ချီနူရွာ အနီးတွင် ပုတ်ပွနေသည့် အမျိုးသမီး ရုပ်အလောင်း (၂)လောင်းကို ယနေ့ မနက်ပိုင်းက တွေ့ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီး အလောင်း ၂ လောင်း သည် လားရှိုးမြို့နယ် တာပုံကျေးရွာအုပ်စု မတ်ချီနူ ရွာသွားလမ်းဘေးရှိခြုံ တခုထဲ တွင်း တွေ့ရှိကြောင်း၊ သေဆုံးသူများ၏အလောင်းမှာ ပုတ်ပွနေပြီဖြစ်သဖြင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သေချာမသိရှိရ ကြောင်း လားရှိုးလူငယ်များလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့မှ စိုင်းဝသုန်ထွန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။
“ဘာကြောင့် အသတ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့ သေချာမသိရသေးဘူး။ နောက် အလောင်းက ပုတ်ပွပြီး နံနေတော့ ဒဏ်ရာရထားတာလား ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ သေချာမသိရဘူး” ဟု စိုင်းဝသုန်ထွန်း က ပြောသည်။
အမျိုးသမီး ၂ ဦး၏ အလောင်းအား သွားရောက်သယ်ဆောင်ရသည့်လမ်းသည် မိုးရွာထားသဖြင့် သွားလာရလွန်စွာ ခက်ခဲ ကြောင်း၊ ရောက်ရှိသွားသည့် အချိန်တွင် အမျိုးသမီး ၂ ဦး၏ ရုပ်အလောင်းသည် ညိုပုတ်ပျက်စီးနေကြောင်း၊ အသက်အရွယ် အရ အသက် ၄၀ ကျော် နှင့် ၅၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြကြောင်း၊ လက်ရှိမှာ လားရှိုးမြို့ ရင်ခွဲရုံကို ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရ သည်။ ထို ပုတ်ပွနေသည့် အမျိုးသမီး ၂ ဦးသည် ညဝတ်စုံ ဝမ်းဆက် ဝတ်ဆင်ထားပြီး၊ အမျိုးသမီး ၂ ဦး လက်ကို နောက် ပြန် ကြိုးတုတ်ထားသည့် အနေအထားနှင့် ခြုံပုတ်ထဲသို့ စွန့်ပစ်ထားသည့် အလောင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း ယခုရက်ပိုင်းလုယက်မှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားကြောင်းသိရသည်။ https://burmese. shannews.org/ar chives/17122
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) က ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်လိုသူများအတွက် ဆန္ဒပြုလွှာများကို ဇွန် ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ စတင် တောင်းယူနေပြီးဖြစ်ကြောင်း ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ စောစေးဝါးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ၎င်းက “ ဒီနေ့က စတောင်းလိုက်တယ်။ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် သူတွေရဲ့ ဆန္ဒပြုလွှာ တောင်းထားတယ်။ ဝင်ပြိုင်ချင်တဲ့ နေရာနဲ့ ဝင်ပြိုင်မယ့် သူတွေကိုပေါ့။ ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့ အရောက် ပါတီဌာနချုပ်ကိုပို့ပေးဖို့ တောင်းထားတယ်” ဟု စောစေးဝါးက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ အနေဖြင့် လာမည့်ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ၎င်းတို့၏ အမာခံနယ်မြေဖြစ်သည့် ကရင်ပြည် နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေများနှင့် ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မွန်၊ တနင်္သာရီရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေအချို့တွင် ဝင်ပြိုင် ရန် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
KPP အနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခြောက်နေရာ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တစ်နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သလို ပါတီဝင် အင်အား တစ်သိန်းကျော်ရှိကာ ကရင်ပါတီများထဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဆက် နိုင်ဖူးသည့် တစ်ခုတည်းသောပါတီဖြစ် သည်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထပ်မံအနိုင်ရရေးအတွက် ကရင်လူငယ်များ ဝိုင်းကူလုပ်ကိုင်ပေးနေကြောင်း KPP နှင့် ကရင်လူငယ်များထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%b1%e1%80 %9b%e1% 80%bc%e1% 80%b8%e1%80%b1%e1%
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ချင်းရွှေဟော်မြို့ရှိ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် လွှင့်ထူထားသော မြန်မာ အလံတိုင်ကို တရုတ်နယ်ခြားစောင့်တပ်က လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် လာရောက်၍ ဖြုတ်ချခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ၂ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ယခုအခါ နယ်နမိတ်မြေ ပြန်တိုင်းရန် သဘောတူညီမှု ရရှိထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလက ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ချင်းရွှေဟော်မြို့ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက် နယ်နိမိတ် ကျောက်တိုင် အမှတ် BP- 144/3 နှင့် BP-144/4 ကြား ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း (MF-824965) ရှိ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မျဉ်းမှ (၄.၇) မီတာခန့်အကွာတွင် စိုက်ထူထားသော မြန်မာနိုင်ငံအလံတိုင်နေရာသို့ တရုတ်နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အဲဒီတုန်းက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် တရုတ်သံအမတ်ကြီးကို ကန့်ကွက်တယ်။ အဲဒီကတဆင့် သူတို့က နိုင်ငံတော်ကို သတင်းပို့တယ်။ အဲဒါပြီးတော့ နယ်နမိတ်ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံလည်း ဖြစ်တယ်။ မိတ်ဝတ်မပျက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ နယ်နမိတ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနဲ့အညီပဲ ဖြေရှင်းပါတယ်”ဟု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်က ပြောသည်။ ၎င်းက“သူတို့က တခါပြန်လာဖျက်တယ်။ ကျနော်တို့က သတ်မှတ်တယ်။ အဲလိုနဲ့ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ၂ နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ရည် ရွယ်ပြီးတော့ သံတမန်နည်းလမ်းအရ ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ တပ်တွေ ပြန်ဆုတ်ပါဆိုပြီး ၂ ဖက် ညှိနှိုင်းပြီ ၂ ဖက်စလုံး ကတပ်ဖွဲ့တွေ ပြန်ဆုတ်သွားတယ်”ဟု ရှင်းပြသည်။ သို့သော် မည်သည့်အချိန်က စတင်ဆောင်ရွက်သည် ဆိုသည့် အသေး စိတ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို မရှင်းပြနိုင်သေးကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပိုသိ၊ ပိုပြောနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ က ပြောသည်။
နယ်စပ်ပြဿနာများသည် တရုတ်နှင့်သာမက အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့်လည်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားတိုင်းတွင် အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသစွာ မိတ်ဝတ်မပျက်စေရန် ပါးနပ်လိမ္မာစွာ ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ရုံး တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
တရုတ် – မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသများ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြကြောင်း သိရသည်။ ထိုသဘောတူစာချုပ်ပါ အခြေအနေများအပါအဝင် လက်ရှိ မြန်မာ – တရုတ် နယ်စပ်အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်း နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စများကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်လက် ဆွေးနွေးနေသလို နယ်စပ် အငြင်းပွားမှုများ ထပ်မံ မဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ပူးတွဲရည်မှန်းချက်တခုကို ဖော်ဆောင်ရန်လည်း မြန်မာအစိုးရက ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ https://.irrawaddy.com/news/2020/0 6/17/224755.html
ကျပ် ၄၀ ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးရှိ ICE မူးယစ်ဆေးဝါးမှုတွင် သံသယရှိသူ အမှတ် ၉၀၃ တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စောအေဝမ်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့ထံစေလွှတ်ပေးရန် အစိုးရ၏ အကြောင်းကြားမှုကို ကလိုထူးဘောတပ်ဖွဲ့- KKO (ယခင် DKBA) ဘက်က တပတ်ကျော်အထိ တုံ့ပြန်မှုမရှိသေးကြောင်း တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ တောင်ကြီး-လွိုင်လင် ကားလမ်းပေါ်တွင် မေလ ၂၄ ရက်နေ့က ICE မူးယစ်ဆေး ၁၆၁၅ ကီလိုနှင့် ဖမ်းမိသူများအား စစ်ဆေး ချက်အရ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောအေဝမ်းအနေဖြင့် သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုများတွင် ပတ်သက်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ၎င်းအား ဥပဒေ နှင့်အညီ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့ အမြန်ဆုံးစေလွှတ်ပေးရန် ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင်က လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် DKBA ထံ အကြောင်း ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
DKBA ဘားအံမြို့နယ်၊ ဆက်ဆံရေးရုံးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး စိုးမိုး က “စာကို ၉ ရက်နေ့က လက်ခံရရှိတော့ ဌာနချုပ်ကို ဆက် လက်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်၊ ခုထိတော့ ကျနော့်ဆီကိုလဲ ဘာမှပြန်လည် ညွှန်ကြားလာတာမရှိသေးဘူး၊ လုံ/နယ် ဝန်ကြီး ဘက်ကို လည်း ပြန်လည်အကြောင်းကြားတာ မရှိသေးဘူးသိရပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောအေဝမ်းနှင့် ပတ်သက်မှုရှိကြောင်း ပြောဆိုထားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုမှ ဖမ်းမိထားသူများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ မေလ ၂၉ ရက်နေ့က လည်း ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ တောင်ကြီး-ကလော ကားလမ်းမဘေးတွင် ရပ်တန့်ထားသည့် ၁၂ ဘီးယာဉ် တစီး အား တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဇော်မင်းထွေး(ခ)ကျားပေါက် ဆိုသူနှင့်အတူ ယာဉ်ပေါ်မှ ICE မူးယစ်ဆေး ၁၅၃၄ ကီလိုအား ထပ်မံဖမ်းမိခဲ့ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါ တားဆီးနိမ်နှင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောအေဝမ်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ စေလွှတ်ပေးထားခြင်းရှိမရှိ ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးနှင့် ကရင်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးတို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် စစ်ဆေးခံရန် စေလွှတ်ပေး သည်ဟု မကြားရသေးကြောင်း ပြောကြသည်။ ဗိုလ်မှူးစောဖားဘလဲ့က “ဒါက လူကြီးတွေ ကိုင်တွယ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့ ကျနော်တို့ကို ဘာမှညွန်ကြားတာတော့ မရှိသေးဘူး၊ ဒီလိုစွပ်စွဲတာအတွက် သူတို့က ကျနော်တို့ကို ဘယ်လိုသဘောထား လဲတော့ မသိဘူးပေါ့၊ ကျနော်တို့က NCA ထိုးထားတဲ့အတွက် လူကြီးတွေကတော့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်နေ တယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကလိုထူးဘောတပ်ဖွဲ့- KKO (ယခင် DKBA)သည် တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ယခုဖြစ်စဉ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနိမ်နှင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းမိထားသူများ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရ စောအေဝမ်း အနေဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း သံသယရှိသည့်အတွက် ဥပဒေအရ စစ်ဆေးနိုင်ရန် DKBA တပ်ဖွဲ့ထံသို့ အကြောင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်မတော်နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/202 0/ 06/18/224910.html
ကချင်ပြည်နယ် တာလောကြီးကျေးရွာရှိ ဒေသခံများ၏ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးထားသည့်မြေနေရာတွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင် ရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကို စီစစ်တွေ့ရှိပါက ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သယံဇာတဝန်ကြီး က ပြောသည်။
လက်ရှိ တာလောကြီးကျေးရွာ အစိုးရ၏သစ်တောကြိုးဝိုင်းအနားရှိဒေသခံများ နှစ်ရှည်ပင်များ စိုက်ပျိုးထားသည့် မြေနေရာ တွင် ဦးညွှန့်အောင်ကုမ္မဏီမှ တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ရန် ဘတ်ဖိုးဖြင့်လိုက်လံထိုးထားသည့်အတွက် အဆိုပါကိစ္စအား တာဝန် ယူ ဖြေရှင်းပေးရန်တိုင်ကြားမှုရှိလာသည့်အတွက် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှစကာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကချင် ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဦးဒရှီလဆိုင်းက ပြောသည်။“မနေ့က စုံစမ်းစစ်ဆေး ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာက ဦးညွှန့်အောင်က ဘယ်သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ ဘယ်သူကလုပ်ဆောင်ခိုင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု စီ စစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ရွာသားတွေက လုပ်ခိုင်းတာလား၊ သို့မဟုတ် ဘယ်အဖွဲ့စည်းက လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတာကို စီစစ်တဲ့ခါမှာ အဖြေတစ်ခုကရလာမှာပါ။ စီစစ်လို့ ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုမိန့်လဲမရှိဘူးဆိုရင် လုပ်ငန်းကိုလည်းရပ်တန်းကရပ်ရမယ်။ လိုအပ်ရင် အရေးယူတဲ့ထိပါ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်။” ဟု ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ပျိုးသည်ကုမ္ပဏီ ၃၀ ကျော်ရှိသော်လည်း အစိုးရတွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် ကချင်စတားကုမ္မဏီတစ်ခုသာရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
“ဘတ်ဖိုးနဲ့ထိုးနေတာ တစ်လလောက်ရှိနေပြီ။ ထိုးတိုင်းလည်း သွားတားတယ်။ အဲနေရာနဲ့ ရွာနှင့်ကျတော့ မနက်သွား ည ပြန်လုပ်ကြတယ်။ ဦးညွှန့်အောင်ကုမ္မဏီဘတ်ဖိုးထိုးတဲ့လူကျတော့ အဲတောမှာကိုနေပြီး ထိုးနေကြတဲ့ချိန်ကျတော့ ကျနော်တို့ သွားတားတဲ့ချိန်မျိုးတော့ မလုပ်ဘူး။ ကျနော်တို့မမြင်ရင် ပြန်ထိုးကြတာ ခုတစ်လလောက်ရှိပြီ။ ပြီးလည်းပြီးခါးနီးနေကြပြီ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရင် အထောက်ထားပြပါဆို မပြနိုင်ဘူး။ ကျွန်းစိုက်ထားတဲ့တောင်သူတွေမှာက ပြေစာရှိပါတယ်။ အဲနေရာ ပတ်လည်မှာ လည်း အကျယ် ၇ပေ အနံ ၇ပေလောက်ရှိတယ်။ ဒေသခံတွေ အဲတောထဲကို သွားဖို့လာဖို့ ကျွှဲ နွား တွေ ထည့် ဖို့လည်း ဘာမှအဆင်မပြေတော့ဘူး” ဟု တာလောကြီးကျေးရွာမှ ဦးအောင်ကျော်ထွန်းကပြောသည်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို တိုင်တာ ၃ ကြိမ်ရှိပြီ။ သက်ဆိုင်ရာကလည်း မလုပ်သေးဘဲ ရပ်ထားဖို့ တားမြစ်ထားတယ်လို့သိရ တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဆက်လုပ်နေသေးတုန်းဘဲ ဒီနေ့နဲ့ မနေ့ကတော့ တောအုပ်ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း နေပြီဖြစ်တဲ့တွက် လုပ်တာမတွေ့ဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း ရောင်းထားတာတွေ ငှားထားတာ တွေလည်း မရှိပါဘူး” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ထားသည့် မြေဧက ၁သိန်းကျော်ရှိနေပြီး တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများကြားအပြင် သစ်တောကြိုးဝိုင်း၊ ဒေသခံများပိုင်မြေစသည့် မြေယာပြသာနာအပါအဝင် ပြဿနာများအားလုံးအား ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်သွယ်မည်ဆိုပါက လယ်ယာမြေဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံ သတ်မှတ်ချက် (SOP) ထွက်ရှိမှသာ အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးနဲ့ လူ့စွမ်းအား ဝန်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းက သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ https://burmese.kachin news.com/2020/06/17/%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%b1%e
၂၀။ ခေါနူးစုမ် အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်များ စည်းကမ်းမဲ့ လွှတ်ခြင်းကို အရေး ယူပေးရန် တောင်းဆို
ခေါနူးစုမ် အမျိုးသားဥယျာဉ် ဧရိယာအတွင်း အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်များ စည်းကမ်းမဲ့ လွှတ်ခြင်းတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် အရေး ယူပေးရန် အဆိုပါဥယျာဉ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သည့် ဒေသခံအချို့က တောင်းဆိုကြောင်း သိရသည်။
လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ ဆလိုင်းယောဟာမာန် က “ကျတော်တို့ ဘောင်ကျေးရွာရဲ့ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းမှာ မပါဝင်တဲ့ လူတွေက နောင်တစ်ချိန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြစားမဲ့နေရာတွေမှာ တရားမဝင် ဆိတ်တွေ လွှတ်တာတို့ ဘောင်ကျေးရွာလူတွေ အားလုံးသောက်သုံးနေတဲ့ ရေစမ်းဦးမှာ အိမ်တွေဆောက်လုပ်ပြီး အမှိုက်တွေကို စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်တာတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေး စေချင်နေကြတယ် ဒေသခံတွေက လည်း”ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသားဥယျာဉ် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်လည်း စည်းကမ်းမဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ ဥယျာဉ်အတွင်း စေလွှတ်ခြင်းအပေါ် အရေးဆောင်ရွက်မှု မလုပ်တာမဟုတ်ပဲ ဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းများလည်း လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် လက်လှမ်းမမီခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် သစ်တော စိုးမိုးရေး၊ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် သစ်တောတရားဝင် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့မှ ဦးရှိန်းဂေငိုင်းကပြောသည်။ ဦးရှိန်းဂေငိုင်းက “မတူပီ၊ မင်းတပ်၊ ကန်ပက်လက် သုံးမြို့နယ်ဆိုတော့ ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းက နည်းလို့ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို သိရင် တရားဥပဒေ အတိုင်း အရေးယူမှာဖြစ်တယ်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ လွှတ်ကြောင်းခွင့်လည်း လုံးဝမရှိဘူး”ဟုပြောသည်။
ခေါနူးစုမ်အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် ကန်ပက်လက်တွင် တည်ရှိပြီး အာဆီယံတွင် မြေသားတောင်အမြင့်ဆုံးစာရင်းတွင် ပါဝင် သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းရာသီများတွင် ပြည်တွင်းခရီးသည်များကို အဓိက ဆွဲဆောင်သည့် ချင်းပြည်နယ်၏ အထင်ကရနေရာလည်း ဖြစ်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73524
၂၁။ ဂျပန်စ်ကျန်ပစ္စည်း စမ်းသပ်တူးဖော်ခဲ့ပြီးနောက် ချန်ထားရှိသော ရေကန်တွင် ၄ လောင်း ပြိုင် ရေနစ်သေဆုံး
သံဖြူဇရပ်မြို့ မိန်ဗလာတောင်၌ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဂျပန်စစ်ကျန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်တူးဖော်ခဲ့ပြီးနောက် မူလအတိုင်းပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ချန်ထားရှိသောရေကန်တွင် ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းခလေး ၄ လောင်းပြိုင် ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှသတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ မိန်ဗလာတောင်ခြေရှိ ဂရုဏာဘုန်းကြီးကျောင်း ကပ္ပိယအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးနှင့် မွန်စာပေလာရောက်သင်ကြား နေသော ကျောင်းသူမိန်းခလေး ၃ ဦးတို့သည် ကျောင်းဝေရာဝစ္စဆောင်ရွက်အပြီး ခြေလက်သန့်စင်ရန် ရေကန်သို့ သွား ရောက်ရာမှ ရေနစ်သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကပ္ပိယ ဒေါ်ခင် (၆၆) နှစ်နှင့် ၎င်း၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ကြ သော မိန်ဗလာတောင်အနီးရှိ ပငကျေးရွာမှ မအေးသီရိစံ (၁၂) နှစ်၊ မရွှေပန်း (၁၂)နှစ်၊ မမိုးသဇင် (၁၁) နှစ်တို့ (၄) ဦးတို့ အလောင်းများအား ရဲစခန်းမှလာရောက်ဆည်ယူ၍ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ဆေးရုံကြီးသို့ ဇွန်လ ၁၇ ရက်၊ ည ၈ နာရီအချိန်တွင် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ရဲကြေးနန်းစာမိတ္တူအရ သိရသည်။ မိန်ဗလာတောင်အနီး အောင်ကုသိုလ်ရပ်ကွက်နေထိုင်သူ လင်းလင်းခိုင်က “မိန်ဗလာတောင်လူသေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံဖြူဇရပ်မြို့က ရဲစခန်း ကြေးနန်းစာကိုဖတ်လိုက်မှ ရေတွင်းပျက် ဆိုတာ ခုမှသိလိုက်ရတယ်၊ သူခိုးတွေက ရေကန်တူးသွားကြတယ်၊ ရဲ တွေက ရေတွင်းပျက်လို့ပြောတာ ဟုတ်နေတာပဲ စည်းဝါးကိုက်နေတာပဲ” ဟု ၎င်း၏ Facebook တွင် မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
ရဲကြေးနန်းစာဖော်ပြချက်တွင် အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ၁ ဖာလုံခန့်အကွာအဝေးရှိ မိန်ဗလာတောင်အနီး Myanmar Eagle Co;Ltd. မှ တူးဖော်ထားရှိသော ရေတွင်းပျက်အတွင်း၌ သေဆုံးလျှက်တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ၎င်းတို့ ၄ ဦးသေဆုံးရခြင်းမှာ ဓမ္မတာအတိုင်းဟုတ်မဟုတ် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေး သေမှုသေခင်းဖွင့် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ Royal Eagle Myanmar Development Group Co., Ltd အား ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကနဦးစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ကို ပိတ်သိမ်းရန်၊ မြေပြင် တွင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား မူလအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီး မှုအတွက် သစ်ပင်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးသွားရန် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ကျင်းပသည့် ၁၅ ကြိမ်မြောက်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်း အဝေး၌ မွန်ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ မြေသားများတူးဖော် ခဲ့ပြီးနောက် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် မူလအတိုင်း လုံးဝပြန်လည်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုနေကြသည်။
မိန်ဗလာတောင်၌ “မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်ကျန်ပစ္စည်း ပဏာမလေ့လာစူးစမ်းရေးအဖွဲ့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ “ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်အဆောက်အဦနေရာများအား စစ်သမိုင်းပြတိုက် ဖော်ဆောင်မည့် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း-စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများမှအပ အခွင့်မရှိမဝင်ရ”ဗီနိုင်းချိတ်ဆွဲ၍လည်းကောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်တူးဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်စစ်စခန်းဖြစ်ခဲ့သော မိန်ဗလာတောင်တွင် ဂျပန်စစ်လက်နက်များ၊ ရွှေချောင်းနှင့် အဖိုးတန် ပတ္တမြား၊ စိန်၊ ရွှေ ရတနာပစ္စည်းများ ဂျပန်တို့မြှုပ်နှံထားသည်ဟု ယခုကာလ အထိ လက်ခံယုံကြည်သူများ ရှိနေသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/18/%e1%80%82%e1%80%bb %e1%80%95%e1%80%94%e1%
၂၂။ မြဝတီမြို့ ညမထွက်ရအမိန့် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ထိ တိုးမြှင့်ထားပြီး ၂လအတွင်း အမိန့် ချိုးဖောက်သူ ၈၀၀ ကျော်ဖမ်း မိ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် ည ၁၂ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီအတွင်း ညမထွက်ရအမိန့်အား ဇွန်လ ၁၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ရက်တိုးမြှင့်ထားလိုက်သည်ဟု မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနက ယနေ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်
လိုက်သည်။ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် မြဝတီမြို့တွင်း ညမထွက်ရအမိန့်ကို ဧပြီလ ၁၈ ရက်မှ မေလ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ည ၁၀ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီအထိ လည်းကောင်း၊ မေလ ၁၆ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ထိကို ည ၁၂ နာရီ မှ နံနက် ၄ နာရီအထိလည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီးနောက် ယခုလို တတိယအကြိမ် ရက်တိုးမြှင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။
မူလ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဧပြီလ ၁၈ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ထိ ထုတ်ပြန်ချက်ကို လိုက်နာမှုမရှိသူများအား ညစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရာ အမိန့်ချိုး ဖောက်သူ ၈၆၁ ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မြဝတီမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးဇော်ကိုကိုက ပြော သည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးရမိသူများအား တရားရုံးတွင် အမှုစွဲတင်ပြီး ဒဏ်ငွေ ၅ သောင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေမဆောင်နိုင်ပါက ထောင်ဒဏ် ၁ လ သတ်မှတ် ခဲ့ရာ ထိုထဲတွင် ဒဏ်ငွေ ၅ သောင်းကျပ်ပေးဆောင်သူ ၆၇၈ ဦး ရှိပြီး ထောင်ဒဏ်ကျခံသူ ၁၈၃ ဦး ရှိကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်သည့်ကာလအတွင်း နယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက် တပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက အမိန့်ဆန့်ကျင်သူများကို ညစဉ် လှည့်လည် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မေလ ၁၈ရက်မှ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ထိ အမျိုးသား ၈၀၃ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၅၈ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရာ မြို့နယ်တရားရုံးသို့ တရာစွဲ တင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီး ရမိသူများတွင် မြို့တွင် အခြေတ ကျနေထိုင်သည့် ဒေသခံအနည်းစုဖြစ်ပြီး ခိုးဆိုးလုနှိုက်နှင့် ပျံကျအများစု ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%bb%e1%80%9 9%e1%80%9d%e1%80 %90%e1%80%ae%e1%
COVID 19 ကာလမှာ တောင်သူလယ်သမားများ အတွက်အထူးချေးငွေများကို ယခု ဇွန်လ မှစတင်ထုတ်ချေး သွားရန် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မွန်ပြည်နယ် ဘဏ်ခွဲ ပြည်နယ် မန်နေဂျာ ဦးကျော်စွာလှိုင် ပြော ကြားသည်။ COVID-19 အထူးချေးငွေအဖြစ် မိုးစပါးချေးငွေ ရရှိထားသူ တောင်သူလယ်သမားများကို တစ်ဧကလျှင် ကျပ်ငါး သောင်း နှုန်းဖြင့် ထပ်ဆောင်း ထုတ်ချေးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့က သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“လယ်သမားတွေအတွက် အထူးချေးငွေ တစ်ဧကကို ၅ သောင်းနှုန်းနဲ့ ထုတ်ချေးမှာ ဖြစ်ပြီး အများဆုံး ဆယ်ဧကကို ထုတ် ချေးပေးသွားမယ် အတိုးနှုန်းကလည်း စိုက်ပျိုးစရိတ် အတိုးအနှုန်းအတိုင်းပဲ ၅ % ပဲ ထုတ်ချေးပေးသွား အခု ဇွန်လ အတွင်း မှာထုတ်ချေးပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ဦးကျော်စွာလှိုင် ကဆိုသည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)ရှိပြီး စိုက်ပျိုး ရေးစရိတ် အကြွေးကျေသူများကို လယ်တစ်ဧက ၅ သောင်းကျပ်နှုန်းဖြင့် လယ်သမားတစ်ဦး အများဆုံးလယ် ၁၀ ဧကစာအ တွက်သာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ထုတ်ချေးပေးသွားမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် မိုးစပါးချေးငွေ ရရှိသူများသည် ယခင်ပုံမှန်ချေးငွေမှ တစ်ဧကလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ ရရှိထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက် စုစုပေါင်းကျပ် ၂ သိန်းရရှိ တော့မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အထူးချေးငွေ ထပ်မံထုတ်ချေးပေးခြင်းသည် လယ်သမားများအတွက် ကောက်စိုက်စရိတ် ပိုရလာနိုင်သည်ဟု သထုံမြို့နယ် ဒုံဝန်းမှ လယ်သမား ဦးအောင်ဝင်းက ပြောသည်။“ထုတ်ချေးပေးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့လယ်သမားတွေက ပိုက်ဆံလိုတာပဲလေ ငွေလိုနေတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ သူတို့ အခုပေးတဲ့ ချေးငွေက စိုက်စရိတ်နဲ့ မလောက်ဘူးလေ အခု ပေးတော့ အသုံးစရိတ် ပိုရှိလာတာပေါ့ လိုအပ်တဲ့ ကောက်စိုက်စရိတ်လေးတွေ ပိုရလာတာပေါ့” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ အဆိုပါ အထူးချေးငွေ Special Covid 19 Relief Loan ကို မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လယ်ဧက ၂ သိန်း ၈ သောင်းကျော် အတွက် ချေးငွေ သန်းပေါင်း ၁ သောင်း ၄ ထောင်ကျော် ထုတ်ချေးပေးသွားရန် လျာထားသည်ဟု သိရသည်။
အလားတူ Covid-19 စီးပွားရေး ကုစားမှုအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ Cash for Lending Support အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာ မတည်ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်းအား ကျပ် ၄၁ ဘီလျံကျော်ဖြင့် ကျေးရွာ ၁၇ဝဝ ရွာအား အမြန်ဆုံးထုတ်ချေး သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/18/ %e1%80%9c%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ငါးမိုင်ခန့်အကွာတွင် အင်အားရစ်(ခ်)တာစကေး ၅.ဝ အဆင့်ရှိ မြေ ငလျင်တစ်ခု ဇွန် ၁၆ ရက် ညနေပိုင်းက လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
ယနေ့ (ဇွန် ၁၆ ရက်) မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၇ နာရီ၊ ၄၅ မိနစ်၊ ၅ဝစက္ကန့် အချိန်တွင် ဂွမြေငလျင်စခန်းမှ မြောက်-အနောက် မြောက်ဘက် (၉၁) မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း (တောင်ကုတ်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (၅) မိုင်ခန့်အကွာ) မြောက်လတ္တီတွဒ် (၁၈.၉၀)ဒီဂရီ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၉၄.၂၉)ဒီဂရီ၊ အနက် (၁၀) ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားရစ်(ခ်) တာစကေး (၅.ဝ) အဆင့်ရှိ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိ မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရ သည်။ https://news-eleven.com/article/178727
၁။ မွို့နယျ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားရှေးခယျြရာတှငျ မှနျညီညှတျရေးပါတီဗဟိုမှ ဝငျရောကျစှကျဖကျမညျမဟုတျ
၂။ ဇှနျ ၁၆ ရကျကို သြှမျးအမြိုးသားအခှငျ့အရေးနအေ့ဖွဈ သတျမှတျ
၃။ AA ကွောငျ့ ရခိုငျ၏ အုပျခြုပျရေး ယန်တရား မပကျြစီးနိုငျဟု အစိုးရ အဖှဲ့ရုံး ပွော
၄။ နှဈပတျအတှငျး ဒုတိယအကွိမျ မွနျမာစဈတပျ နှငျ့ KIA တိုကျပှဲ ဖွဈပှား
၅။ ဒီမိုကရစေီအရေးနှငျ့ တိုငျးရငျးအရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ နျောအုနျးလှ ရနျကုနျကရငျ့ရေးရာ ဝငျပွိုငျမညျ
၆။ လာမညျ့ လှတျတျောတှငျ ၅၈ နရော ရရှိမညျဟု SNDP ခနျ့မှနျး
၇။ ကှတျခိုငျ ရှာသား ၅ ဦး တပျမတျောမှ လမျးပွ အဖွဈချေါဆောငျသှား
၈။ သခငျစဈကုမ်ပဏီကို တရားစှဲဆိုထားသညျ့အမှု တရားလိုသကျသေ ရဲစခနျး၏ထှကျဆို
မှုကို အားရကနြေပျမှု မရှိဟုဆို
၉။ အမျးမွို့ ခငျြးဒုက်ခသညျ တဈထောငျကြျော ဆနျရိက်ခာအရေးပျေါလိုအပျ
၁၀။ နောငျခြို ဂုတျတှငျး ကားတစီး ခြောကျထဲကြ ၃ ဦးသေ
၁၁။ ပွညျနယျအစိုးရ၏ လယျယာမွဖေျောထုတျမှုကွောငျ့ လီဒိုလမျးမပျေါကြေးရှာ ၂ ခုအငွငျးပှားဖှယျရှိနေ
၁၂။ မူးယဈဆေးဝါးပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားအတှကျ ထားစရာနရောလုံလောကျမှုမရှိတော့ဟု မှနျပွညျသဈပါတီ သထုံခရိုငျ တာဝနျရှိသူ ပွော
၁၃။ ကိုဗဈ လုပျငနျးစဉျ ဆောငျရှကျနသေညျ့ RCSS/SSA ကို အာဏာပိုငျမြား တားမွဈ
၁၄။ ကြောကျဖွူတှငျ ထှအေုပျဝနျထမျး ၁ ဦးအသတျခံရ
၁၅။ လားရှိုးမွို့နယျအတှငျး ပုတျပှနသေညျ့ အမြိုးသမီးအလောငျး ၂ လောငျးတှေ့
၁၆။ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျလိုသူမြားအတှကျ ဆန်ဒပွုလှာမြား KPP စတငျတောငျးယူ
၁၇။ မွနျမာအလံ ဖွုတျခခြံခဲ့ရသညျ့ ခငျြးရှဟေျောတှငျ နယျနမိတျ ပွနျတိုငျးဖို့ တရုတျနှငျ့ သဘောတူညီမှု ရ
၁၈။ မူးယဈသံသယ တပျရငျးမှူးကို ရဲထံအစဈခံရနျ အစိုးရအသိပေးမှု DKBA မတုံ့ပွနျ
၁၉။ တာလောကွီးကြေးရှာ နှဈရှညျပငျစိုကျပြိုးမွနေရော ဖကျြစီးခံရမှု ပွညျနယျအစိုးရ စုံစမျးနေ
၂၀။ ခေါနူးစုမျ အမြိုးသားဥယြာဉျတှငျ အိမျမှေး တိရိစ်ဆာနျမြား စညျးကမျးမဲ့ လှတျခွငျးကို အရေးယူပေးရနျ တောငျးဆို
၂၁။ ဂပြနျဈကနျြပစ်စညျး စမျးသပျတူးဖျောခဲ့ပွီးနောကျ ခနျြထားရှိသော ရကေနျတှငျ ၄ လောငျးပွိုငျ ရနေဈသဆေုံး
၂၂။ မွဝတီမွို့ ညမထှကျရအမိနျ့ ဇှနျလ ၃၀ ရကျထိ တိုးမွှငျ့ထားပွီး ၂လအတှငျး အမိနျ့ခြိုးဖောကျသူ ၈၀ဝ ကြျောဖမျး မိ
၂၃။ လယျသမားမြားအတှကျ COVID 19 ကာလအထူးခြေးငှေ စတငျထုတျပေးသှားမညျ
၂၄။ တောငျကုတျမွို့နှငျ့ ငါးမိုငျခနျ့အကှာတှငျ အငျအားရဈ(ချ)တာစကေး ၅.ဝ အဆငျ့ရှိ မွငေလငျြတဈခု လှုပျခတျ
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဝငျကွမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားရှေးခယျြရာတှငျ သကျဆိုငျရာမွို့နယျအလိုကျ စိတျကွိုကျရှေး ခယျြ စမှောဖွဈပွီး မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ဗဟိုမှ ဝငျရောကျစှကျဖကျမညျမဟုတျကွောငျး ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ နိုငျကနျြရဈက ပွောကွားသညျ။“မိမိတို့ကိုယျစားလှယျလောငျးရှေးခယျြဖို့က မိမိတို့မွို့နယျကျောမတီတှအေပျေါမှာပဲ အဓိက မူတညျပါတယျ၊ ရှေးခယျြမှုအခှငျ့အာဏာတှေ မွို့နယျကိုအပွညျ့အပျနှငျးပေးထားပါတယျ၊ ကနြျောတို့ ဗဟိုအဆငျ့ရှေးခယျြ ရေးအဖှဲ့ကနေ မွို့နယျတှကေို ဝငျရောကျစှကျဖကျမှာမဟုတျဘူး၊ ကိုယျ့မွို့နယျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ကိုယျ့မွို့နယျ ကသာ ရှေးခယျြတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ” ဟု နိုငျကနျြရဈက ဆိုသညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီ ဥက်ကဌ နိုငျတငျအောငျ၊ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျဝငျမြားဖွဈကွသော နိုငျကနျြရဈ၊ နိုငျမှနျရာဇာနှငျ့ နိုငျအောငျမှနျ တို့ပါဝငျသညျ့ ဗဟိုအဆငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးရှေးခယျြရေးအဖှဲ့က ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး မဟာဗြူဟာ နှငျ့ပတျသကျ၍ ယနေ့(ဇှနျ ၁၆) တှငျ သံဖွူဇရပျမွို့၌ မွို့နယျ MUP ပါတီကျောမတီဝငျ ၁၀ဝ ခနျ့အား လာ ရောကျတှဆေုံ့၍ ရှငျးလငျးပွောကွားခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ကိုယျစားလှယျလောငျးအဖွဈ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျလိုသူ ပါတီဝငျမြားအနဖွေငျ့ သကျဆိုငျရာမွို့နယျပါတီရုံးအသီးသီးသို့ ဇှနျလ ၃၀ ရကျနကေို့ နောကျဆုံးထား၍ သတျမှတျလြှောကျ လှာပုံစံဖွငျ့ အဆိုပွုလှာ တငျသှငျးရမညျဖွဈပွီး မွို့နယျအဆငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးရှေးခယျြရေးအဖှဲ့က မိမိတို့ ကိုယျစား လှယျလောငျးမြားကိုရှေးခယျြ၍ ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီး ပါတီဗဟိုဌာနခြုပျ စာရငျးပေးပို့ရမညျဟု အသိပေး ထားသညျ။ MUP ပါတီကိုယျစားလှယျလောငျး အရညျအခငျြးသတျမှတျခကျြ ၁၉ ခကျြရှိသညျ့အနကျ အဓိကအားဖွငျ့ ဒသေခံ (သို့မဟုတျ) ဒသေတှငျးနထေိုငျသူ (သို့မဟုတျ) ဇာတိမှေးရပျမွမှေ ပါတီဝငျဖွဈရမညျဟု ကိုယျစားလှယျလောငျး အရညျ အခငျြး (Criteria of Candidate) သတျမှတျခကျြတှငျ ဦးစားပေး ဖျောပွထားသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ၌ သံဖွူဇရပျမွို့နယျအတှငျး မှနျအမြိုးသားပါတီ MNP, မှနျဒသေလုံးဆိုငျရာဒီမိုကရစေီပါတီ AMDP, အမြိုးသမီးပါတီ(မှနျ)နှငျ့ မှနျအမြိုးသား တဈသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျလောငျးမြားစှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွသဖွငျ့ မှနျ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား အခငျြးခငျြးထိပျတိုကျဖွဈကုနျကွပွီး NLD ကိုယျစားလှယျမြားက မဲဆန်ဒနယျမွအေားလုံးတှငျ အပွတျအသပျ အနိုငျရရှိခဲ့ကွောငျး တှရေ့သညျ။
ယခုအခါ မှနျအငျအားစုအားလုံး ပွနျလညျပေါငျးစညျးထားသော မှနျညီညှတျ ရေးပါတီ၏ တဈခုတညျးသော အလံတျောအောကျတှငျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျကွမညျ့ မှနျအမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြား မဲဆန်ဒနရောအတျောမြားမြားတှငျ အောငျပှဲဆငျနိုငျလိမျ့မညျဖွဈကွောငျး စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသူမြားက သုံးသပျကွသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/06/16/%e1%80%99%e1%80%bc%e1
လှနျခဲ့သညျ့ ၂၃ နှဈက သြှမျးပွညျ အလယျပိုငျးတှငျ အစုလုံအပွုံလိုကျ သတျဖွတျခံရသညျ့ နကေို့ သတိရ အောကျမစေ့ရေနျ အတှကျ ဇှနျ ၁၆ ရကျကို သြှမျးအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးနအေ့ဖွဈ သတျမှတျလိုကျကွောငျး CSSU ကထုတျပွနျလိုကျသညျ။
၁၉၉၆ မှ ၁၉၉၈ ခုနှဈအတှငျးဖွတျလေးဖွတျစီမံကိနျးဖွငျ့ အစိုးရတပျမတျောမှ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျးရှိ ကြေးလကျလူထုအား အတငျးအဓမ်မ နရေပျပွောငျးရှခေို့ငျးမှု၊ အစုလိုကျအပွုံလိုကျသတျဖွတျမှု၊ အတငျးအဓမ်မပွုကငျြ့မှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။ ၁၉၉၇ ခုနှဈ ဇှနျလ ၁၆ ရကျက သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး လှိုငျလငျခရိုငျ ကှနျဟိနျးမွို့နယျအတှငျး အမြိုးသမီးနှငျ့ကလေးငယျအပါ အဝငျ ကြေးလကျပွညျသူ ၅၆ ဦးကို သတျဖွတျမှုလုပျခဲ့သညျ့ရကျကို ဝမျးနညျးသတိရအောကျမသေ့ညျ့အနဖွေငျ့ သြှမျးအမြိုး သားလူ့အခှငျ့အရေးနအေ့ဖွဈ သတျမှတျလိုကျရခွငျးဖွဈကွောငျး သြှမျးပွညျညီညှတျရေးကျောမတီက ယနေ့ ဇှနျ ၁၆ ရကျစှဲ ဖွငျ့ ထုတျပွနျလိုကျသညျ။
သြှမျးအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးနေ့ သတျမှတျလိုကျသညျ့ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး CSSU ၏ အတှငျးရေးမှူး စိုငျးဆိုငျမုဒျ က “လှနျခဲ့တဲ့ ၂၃ နှဈက စဈတပျက သြှမျးပွညျသားတှအေပျေါလူ့အခှငျ့အရေး ကြူးလှနျခဲ့တာတှကေို ပွနျသတိရအောငျ၊ လူ ငယျတှကေို သမိုငျး ကွောငျးသိအောငျ၊ နောကျအဲဒီအခြိနျက သဆေုံးသှားတဲ့သူတှကေို သတိရအောကျမဖေို့ပါ”ဟု သြှမျးသံ တျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့နှဈပေါငျး ၂၃ နှဈကအတိုငျး သမိုငျးဖွဈရပျဆိုးမြားထပျမံ မပျေါပေါကျစဘေဲ ငွိမျးခမျြး ရေး လငျြမွနျစှာဖွဈထှနျးရနျ၊ ကြူးကြျောစျောကားသူမြား၏ အပွဈကွှေးအား ဆေးကွောပေးရာရောကျစရေနျ၊ မတရားကြူး လှနျခံခဲ့ရသညျ့ အပွဈမဲ့ပွညျသူတို့၏ မိသားစုဝငျးမြား အားနှဈသိမျ့ကုစားပေးရာရောကျစရေနျနှငျ့ သဆေုံးသှားသညျ့ အပွဈ မဲ့ပွညျသူတို့အား အောကျမသေ့တိရသညျ့အနဖွေငျ့ ရညျရှယျကာ ဇှနျ ၁၆ ရကျကို သြှမျးအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးနအေ့ဖွဈ သတျမှတျကွောငျး CSSU ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
မွနျမာစဈအစိုးရ၏ စဈရာဇာဝတျမှုမွောကျသညျ့ ကြူးလှနျမှုမြားကို အဆိုးရှားဆုံးနှငျ့ အကယျြပွနျ့ဆုံးထိခိုကျခံစားခဲ့ရသညျ့ မွို့နယျပေါငျး ၁၁ မွို့နယျ၊ ရှာပေါငျး ၁၄၀ဝ ကြျော ထိခိုကျပကျြစီးခဲ့ပွီး၊ အမြိုးသမီးပေါငျး ၆၀ဝ ကြျော လိငျအကွမျးဖကျခံခဲ့ရ သညျ။ မွနျမာစဈအစိုးရ အနဖွေငျ့ သြှမျးပွညျသူမြားအပျေါ ကြူးလှနျခဲ့သညျ့ဖွဈရပျကို ယနထေိ့တိုငျ အရေးယူဆောငျရှကျ ခွငျးမရှိသေးသညျ့အပွငျ ဆကျလကျပွီးကြူးလှနျနဆေဲဟု သြှမျးလူ့အခှငျ့အရေး တကျကွှဆောငျရှကျသူမြားကပွောဆိုသညျ။
၁၉၉၆-၁၉၉၈ ကာလတှငျ သြှမျးပွညျ တောငျပိုငျးမွို့နယျ ၁၅ မွို့နယျအတှငျး စဈအစိုးရမှ နယျမွေ ရှငျးလငျးမှုကွောငျ့ ကြေး လကျပွညျသူ ၄ သိနျးကြျော နရေပျစှနျ့ခှာခဲ့ရပွီး အစုလိုကျအပွုံလိုကျ သတျဖွတျခံရခွငျး အဓမ်မပွုကငျြ့ခံရခွငျးသညျ ယနေ့ တိုငျ တရားမြှတမှု မရရှိသေးကွောငျးလညျး သြှမျးလူမှုအသငျးမြားက ယနရေ့ကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျကွညောလိုကျသညျ။ ဇှနျ ၁၆ ရကျကိုသြှမျးလူမှု အဖှဲ့အစညျးမြားက နရောဒသေအနှံ့တှငျ လှနျခဲ့သညျ့ ၂၃ နှဈတှငျ စဈတပျကြူးလှနျမှုကွောငျ့ သဆေုံး သှားသူမြားအတှကျ ဝမျးနညျးခွငျး သတိရအောကျမခွေ့ငျးအနဖွေငျ့ အလှူဒါနမြားလညျး ပွုလုပျပေးကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17118
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ရက်ခိုငျ့ စဈတပျ (AA) ၏ တိုကျခိုကျနမှေုမြားက အစိုးရ၏ အုပျခြုပျရေး ယန်တရားမြား ပကျြစီးသှားနိုငျသညျ အထိ စိုးရိမျစရာမရှိကွောငျး ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူမြားကပွောသညျ။
နပွေညျတျောတှငျ ကငျြးပပွုလုပျသညျ့ အစိုးရ၏ စတုတ်ထ ၁ နှဈတာကာလအတှငျး ဆောငျရှကျခဲ့သညျမြားကို ပွညျထောငျစု အစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာနမှ ရှငျးလငျးစဉျ ယငျးဌာန၏ ဒုတိယဝနျကွီး ဦးတငျမွငျ့နှငျ့ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးမွငျ့သနျး တို့က အထကျပါ အတိုငျး ပွောဆိုခွငျးဖွဈသညျ။ “ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ကလညျး သူ့နယျမွဒေသေအတှကျ သူလညျးပဲအေးခမျြးဖို့အတှကျ ဒီအုပျခြုပျရေးယန်တရားလညျပတျနိုငျဖို့အတှကျတော့ သူလညျးပဲ အားသှနျခှနျစိုကျဆောငျရှကျနတေယျ”ဟု အစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာန၏ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးမွငျ့သနျးက သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲအပွီးတှငျ သတငျးထောကျမြားကို ပွောသညျ။
AA အဖှဲ့သညျ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ အစိုးရ၏ အုပျခြုပျရေးစနဈအစား ၎င်းငျးတို့၏ အုပျခြုပျရေးစနဈဖွငျ့ အစားထိုးမညျဟု ကွှေး ကွျောထားပွီး ရခိုငျပွညျနယျမှ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောကို အပွီးအပိုငျထှကျခှာသှားရနျပွီးခဲ့သညျ့ မေ ၂၉ ရကျနကေ့ သဘော ထား ကွညောခကျြတစောငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ AA အဖှဲ့သညျ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ အုပျခြုပျရေးယန်တရားပကျြပွားစရေနျ အတှကျ ရဲစခနျးမြားကို တိုကျခိုကျခွငျး၊ အုပျခြုပျရေးမှူးမြားကို ဖမျးဆီးသတျဖွတျခွငျးမြား ဆောငျရှကျလကျြရှိရာ မွောကျဦး၊ မွပေုံ၊ မငျးပွားနှငျ့ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျမြားတှငျ အုပျခြုပျရေးမှူးမြား နုတျထှကျခဲ့ကွောငျး အစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာန၏ ဒုတိယ ဝနျကွီး ဦးတငျမွငျ့က ပွောသညျ။
ဦးတငျမွငျ့က“အုပျခြုပျရေးပကျြပွားအောငျလို့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှကေို ဖမျးတယျ။ သတျတယျ။ စခနျးတှကေို တိုကျတယျ။ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့အစညျးဝငျတှကေိုလညျး ဖမျးဆီးတယျ။ ချေါယူနှိပျစကျတယျ။ မညျသို့ပငျဆိုစေ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရက သမ်မတရုံးရဲ့ ညှနျကွားခကျြနဲ့အညီ အုပျခြုပျရေးယန်တရားကို ပွနျလညျတညျ ဆောကျနပေါတယျ”ဟု ပွောသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျ၏ အုပျခြုပျရေးယန်တရားကို ထိနျးခြုပျနိုငျရနျ အစိုးရနှငျ့ AA အဖှဲ့တို့ အားပွိုငျနသေညျ့ သဘောဖွဈနပွေီး AA အဖှဲ့ကလညျး ၎င်းငျးတို့၏ အာဏာထူထောငျနိုငျရနျ Arakan People Authority (APA) ဟုချေါသညျ့ ရခိုငျပွညျသူ့အာဏာ ပိုငျအဖှဲ့ ဖှဲ့စညျးနိုငျရေးကွိုးစားနကွေောငျး ရခိုငျအရေးလလေ့ာသူ ဦးမောငျမောငျစိုး ကပွောသညျ။“ပွောရရငျတော့ ၂ ဖကျ စလုံးက အုပျခြုပျရေးယန်တရားကို ခြုပျကိုငျနိုငျဖို့အပွိုငျကွိုးစားနတေဲ့ကာလပေါ့။ ဒုတိယအခကျြကတော့ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေး မှူး တှကေ ဖမျးဆီးခံရလို့ နုတျထှကျနတေဲ့အခြိနျမှာ အစိုးရရဲ့ယန်တရားကို ဘယျလိုတညျဆောကျရမလဲဆိုပွီး အစိုးရကလညျး လုံးပနျးနတေဲ့ကာလဖွဈတယျ။ နညျးနညျးတော့အားပွိုငျနတေဲ့ကာလလို့ပဲ ပွောရပါလိမျ့မယျ”ဟု ၎င်းငျး ကသုံးသပျသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ AA အဖှဲ့က ၎င်းငျးတို့၏ အုပျခြုပျရေးယန်တရားနှငျ့ အစားထိုးမညျဟု ပွောဆိုခဲ့ပွီး ယခုအခါ ရဲစခနျး၊ ရဲကငျး မြားကို ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခွငျးသညျ အုပျခြုပျရေး ယန်တရားကိုတိုကျခိုကျနခွေငျးဖွဈကွောငျး တပျမတျောမှ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။“တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလုပျငနျးတှကေို တိုကျခိုကျတာဟာ အုပျခြုပျရေးယန်တရားကို ပကျြပွား အောငျလုပျတာပဲ။ ဒါကွောငျ့ ထိရောကျတဲ့အုပျခြုပျမှုစနဈ လိုနပွေီလို့ ပွောတာ”ဟု ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွော သညျ။ မနကေ့ နပွေညျတျောတှငျ သတငျးထောကျမြားက ရခိုငျပွညျနယျတှငျ စဈအုပျခြုပျရေးဝငျရောကျနိုငျသလားဆိုသညျ့ မေးခှနျးကို အစိုးရအဖှဲ့ရုံးညှနျခြုပျ ဦးမွငျ့သနျးက ယငျးအခွအေနအေထိ စိုးရိမျစရာ မလိုကွောငျး ပွနျလညျတုနျ့ပွနျသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/202 0/06/16/224725.html
မွနျမာအစိုးရတပျနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA ကွား နှဈပတျအတှငျး ဒုတိယအကွိမျတိုကျပှဲသညျ ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျတှငျ ဇှနျလ(၁၇)၊ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နံနကျပိုငျးက ဖွဈပှားခဲ့သညျ။
ကှတျခိုငျမွို့ အနောကျမွောကျဘကျ KIA တပျမဟာ (၄) လကျအောကျခံ တပျရငျး (၈) နယျမွေ Kaleng (ကာလိုငျ) ကြေးရှာ အုပျစု Nawng Maw Bum (နောငျမော့တောငျ)သို့ တပျမတျောစဈကွောငျးမြား စဈဆငျလှုပျရှားလာသောကွောငျ့ KIA ဘကျက ခုခံယငျး တိုကျပှဲဖွဈပှားရကွောငျး KIA တပျမဟာ (၄) အရာရှိတဈဦး ယခုလို အတညျပွုပွောပါသညျ။ “မွနျမာစဈ တပျ ထိုးစဈဆငျလာတာကတော့ သုံး၊ လေးရကျလောကျရှိပွီ၊ သုံးနရောကနေ မိမိသို့ စခနျးဆီ တကျလာတာပါ။ တပျမ (၈၈) နဲ့ တခွားတပျရငျးတှေ ပူးပေါငျးတဲ့ စဈကွောငျးတှေ စုစုပေါငျး အငျအား ၄၀ဝ လောကျရှိမယျ”ဟု သူက ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ပွောပါသညျ။ ယခုတိုကျပှဲသညျ KIA တပျရငျး (၈) လကျအောကျ Kaleng တိုကျနယျရုံးကို လုံခွုံရေးပေး သော KIA အထူးလှုပျရှားရေး တပျရငျး (Mobile Battalion) (၂၉) နှငျ့ ‘နယျမွရှေငျးလငျးရေးခေါငျးစဉျ’ဖွငျ့ ထိုးစဈဆငျလာ သော မွနျမာစဈတပျနှငျ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခွငျး ဖွဈသညျဟု အထကျ KIA အရာရှိက ဆကျဆိုသညျ။
လှနျခဲ့သော တဈပတျကြျောမှာလညျး မူဆယျမွို့နယျအတှငျး KIA တပျမဟာ (၆) လကျအောကျခံ တပျရငျး (၉) အခွစေိုကျ စခနျး Htan Hpa Bum (ထနျးဖါတောငျ) ကို မွနျမာစဈတပျ တပျမ (၈၈) နှငျ့ တပျမ (၉၉) ပူးပေါငျးစဈကွောငျးမှ ဇှနျလ (၆) ရကျ မှ (၇) ရကျထိနှဈရကျကွာ ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျပွီး သိမျးပိုကျခဲ့သညျ။ COVID-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကာလ တပျမတျော က ၎င်းငျးတို့ အကွမျးဖကျအဖှဲ့အဖွဈ သတျမှတျထားသော ရခိုငျ AA အဖှဲ့နှငျ့ဖွဈပှားနသေော စဈပှဲမှလှဲပွီး ကနျြ တနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာကို မလေ (၁၀)ရကျမှ သွဂုတျလ (၃၁)ရကျထိ စဈပှဲ ရပျထားကွောငျး ကွညောထားခြိနျ ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မှာ KIA အဖှဲ့ကို ‘နယျမွရှေငျးလငျးရေး ခေါငျးစဉျ’သတျကာ လိုကျလံတိုကျခိုကျမှုမြား ပွုလုပျနခွေငျးလညျး ဖွဈသညျ။ https://burmese.kachinnews.co m/2020/06/18/%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%85%e1%80%b9%e1
၅။ ဒီမိုကရစေီအရေးနှငျ့ တိုငျးရငျးအရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ နျောအုနျးလှ ရနျကုနျ ကရငျ့ရေးရာ ဝငျပွိုငျမညျ
ဒီမိုကရစေီအရေး၊ လူ့အခှငျ့အရေးနှငျ့ တိုငျးရငျးသားအရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ နျောအုနျးလှ သညျ လာမညျ့ပါတီစုံ အထှေ ထှရှေေးကောကျပှဲတှငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကရငျတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီးနရောကို ညီညှတျသောတိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ(UNDP) ကိုယျစားပွု ဝငျပွိုငျသှားမညျဟု သူမက ကအေိုငျစီသို့ ဇှနျ ၁၇ ရကျနတှေ့ငျ အတညျပွု ပွောသညျ။
“ ပါတီက တာဝနျပေးလို့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကရငျရေးရာ မဲဆန်ဒနယျ ဝငျပွိုငျမယျ။ ကရငျလူမြိုးတှေ အခှငျ့အရေး အပွညျ့အဝရဖို့၊ တနျးတူအခှငျ့အရေးရှိဖို့ လုပျဆောငျခငျြလို့ အခုလို ဝငျပွိုငျတာဖွဈပါတယျ”ဟု နျောအုနျးလှက ပွောသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရစေီအရေးတျောပုံတှငျ စတငျပါဝငျပွီးနောကျ နိုငျငံရေးလောကသို့ ဝငျရောကျလာသူ ဖွဈသညျ။ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) တှငျ ရပျကြေးအဆငျ့မှ ဗဟိုအမြိုးသမီးအဆငျ့ထိ တာဝနျယူခဲ့ဖူးသူဖွဈသညျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ လှတျမွောကျရေးအတှကျ ရှတေိဂုံဘုရားတှငျ ဆုတောငျးပှဲပွုလုပျရာ ပါတီစညျးကမျးနှငျ့ မညီသညျ့ အတှကျ NLD က ပါတီဝငျအဖွဈမှ သူမအား ၂၀ဝ၅ ခုနှဈတှငျ ထုတျပယျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
သူမသညျ နိုငျငံရေးလောကသို့ စတငျဝငျရောကျခဲ့ခြိနျကတညျးက ၂၁ ကွိမျ အဖမျးခံခဲ့ရဖူးပွီး ထောငျ ၁၁ ကွိမျ ကခြံရထား သညျ။ ထိုထဲတှငျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ သွဂုတျ ၁၁ ရကျနတှေ့ငျ ရနျကုနျမွို့၊ မဟာဗန်ဓုလ ပနျးခွံရှေ့၌ ကရငျ့အာဇာနညျနေ့ ပွုလုပျ သညျ့အတှကျ ထောငျ ၁၅ ရကျ ကခြဲ့မှုဖွဈစဉျတှငျ ကရငျတိုငျးရငျးသားမြားက သူမအပျေါ အားပေးဝနျးရံမှုမြားစှာရရှိခဲ့ သညျ။ ထို့အပွငျ သူမသညျ နိုငျငံရေးတကျကွှလှုပျရှားသူအဖွဈ ရပျတညျခဲ့သျောလညျး ၂၀၁၉ ဧပွီ ၅ ရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျ သညျ့ UNDP ပါတီတညျထောငျရေး ဆှေးနှေးပှဲတှငျ ပါတီနိုငျငံရေးပွနျလုပျမညျဟု ကအေိုငျစီသို့ သီးခွား ပွောဆိုခဲ့ဖူးသညျ။
၎င်းငျးက“လကျရှိ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးလုပျငနျးစဉျက ပါတီပွငျပနိုငျငံရေးနဲ့လုပျတဲ့အခါ မလှယျကူတာတှရှေိတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပါတီနိုငျငံရေးပွနျလုပျဖို့ ရညျရှယျတယျ။ ပူးပေါငျးမဲ့ပါတီကတော့ အခု ၉၀ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားအဖှဲ့က တညျထောငျမယျ့ပါတီမှ ဝငျရောကျလုပျကိုငျဖို့ ရညျရှယျထားတယျ”ဟု ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဧပွီ ၅ ရကျနတှေ့ငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွော သညျ။ လကျရှိ နျောအုနျးလှသညျ ၁၉၉၀ အမတျမြား တညျထောငျထားသညျ့ ညီညှတျသောတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမို ကရစေီပါတီ(UNDP)တှငျ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးတာဝနျယူထားသူ ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/202 0/06/%e1% 80%92%e1%80%ae%e1%80%99%e1%80%ad% e1%80%af%
လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ သြှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ( SNDP) အနဖွေငျ့ လှတျတျောတှငျ ၅၈ နရောခနျ့မှနျးထားကွောငျး SNDP ဥက်ကဌ ဦးစိုငျးအိုကျပေါငျး က ပွောကွားလိုကျသညျ။
“ကနြျောတို့ အရငျက ၅၈ ယောကျ နိုငျဖူးတယျလေ။ အခုလဲ အဲ့လောကျ မှနျးထားတာပေါ့”ဟု ဦးစိုငျးအိုကျပေါငျး ကပွော သညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၁၀ ခုနှဈတှငျ SNDP ပါတီသညျ လှတျတျောတှငျ ၅၈ နရောရရှိခဲ့ပွီး၊ ဝနျကွီးနရော ၆ ဦးရခဲ့သဖွငျ့ အတှအေ့ကွုံမြားစှာရှိကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျခံပွီး အနိုငျရမညျဆိုပါက သြှမျးပွညျအစိုးရ ဖွဈနိုငျ ကွောငျးလညျး ဦးစိုငျးအိုကျပေါငျးက သုံးသပျပွောဆိုလိုကျသညျ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ SNDP အနဖွေငျ့ သြှမျးပွညျနရောအနှံ့အပွငျ ကခငျြပွညျနယျ၊ မန်တလေးတိုငျး စုစုပေါငျးမွို့နယျ ၃၀ မွို့နယျတှငျ ဝငျပွိုငျသှားမညျဟု ပါတီ ဥက်ကဌ ဦးစိုငျးအိုကျပေါငျးက ပွောကွားသညျ။“ မွို့နယျ ၃၀ လောကျ ဝငျပွိုငျမယျ။ သြှမျးအရှေ့၊ သြှမျးတောငျ၊ သြှမျးမွောကျ နောကျပွီး ကခငျြပွညျနယျ သြှမျးပွညျ ပွငျပကတော့ ကခငျြပဲ။ မန်တလေးတိုငျးက သြှမျးတိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီးနရောလဲ ဝငျပွိုငျမယျ”ဟု ဦးစိုငျးအိုကျပေါငျး က ထပျလောငျးပွောသညျ။
ထို့ပွငျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အမြိုးသမီး နှငျ့ လူငယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးကို ဦးစားပေး ရှေးခယျြသှားမညျ ဖွဈပွီး ပါတီ၏ ထိပျသီးခေါငျးဆောငျမြား ပါဝငျယှဉျပွိုငျသှားမညျ မဟုတျကွောငျးလညျးသိရသညျ။“ အမြိုးသမီးနဲ့ လူငယျက ၂၀၊၃၀ ရာခိုငျနှုနျးပါမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ကနြျောကတော့ ဝငျမပွိုငျတော့ဘူး။ ကနြျောတို့လူငယျတှကေို နရောပေး တယျ”ဟု ဦးစိုငျးအိုကျပေါငျးက ဆိုသညျ။ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ SNDP အနဖွေငျ့ သြှမျးပွညျတှငျ လှတျတျောတနရော တှငျသာ ရရှိခဲ့သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17161
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျအတှငျး ယနေ့ မနကျ တိုကျပှဲ ၂ ကွိမျဖွဈပှားပွီး ရှာသား ၅ ဦးကို တပျမတျောမှ လမျးပွအဖွဈချေါဆောငျသှားကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ အစိုးရတပျမတျောမှလမျးပွအဖွဈချေါဆောငျသှားသညျ့ အမြိုးသား ၅ ဦးထဲမှ ၃ ဦးသညျ ကှတျခိုငျမွို့နယျ နောငျဟှယျကြေးရှာတှငျ နထေိုငျသူမြားဖွဈပွီး ကနျြ ၂ ဦးမှာ ကာလိုငျဇှပျအောငျ စဈရှောငျစခနျးတှငျ နထေိုငျသူမြားဖွဈကွောငျး ကှတျခိုငျဒသေခံမြားပွောပွခကျြအရသိရသညျ။
“ နောငျဟှယျ ရှာသား ၃ ဦးက တအာငျး(ပလောငျ) လူမြိုးတှပေါ။ စဈရှောငျစခနျးက ၂ ဦးက ကခငျြလူမြိုးတှပေါ။ လမျးပွ အဖွဈချေါသှားတယျလို့သိရပါတယျ”ဟု အစိုးရတပျမတျောမှ ချေါဆောငျသှားစဉျ မွငျတှလေို့ကျသညျ့ ဒသေခံ အမြိုးသား တဦးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ ဖွဈပှားနသေော စဈရေးဋိပက်ခကွောငျ့ တောငျယာအလုပျသှားလုပျပွီး စဈရှောငျ စခနျးသို့ပွနျလာသညျ့ အမြိုးသား ၂ ဦးကိုလညျး စဈတပျက ယနမေ့နကျပိုငျးကဖမျးဆီး ချေါဆောငျသှားခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။“နောငျဟှယျရှာသား ၃ ဦးကိုတော့ ရှာကနခေျေါသှားတယျ။ စဈရှောငျ အမြိုးသား ၂ ယောကျက တောငျယာက နပွေနျလာတာ။ လမျးမှာ တပျမတျောနဲ့တှတေ့ော့ လမျးပွအဖွဈချေါသှားတာ။ သူတို့တှကေ အသကျက ၂၀-၃၀ ဝနျးကငျြရှိ မယျထငျတယျ”ဟု တပျမှ ချေါသှားစဉျမွ ငျတှလေို့ကျသညျ့ အမြိုးသားတဦးက ပွနျပွောပွသညျ။
ယခုရကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျ ကာလိုငျ၊ နောငျဖနျးကြေးရှာနှငျ့ နမျ့ဖူးကြေးရှာတှငျ ဖွဈပှားနသေညျ့ တိုကျပှဲမြားသညျ အစိုးရ တပျမတျော နှငျ့ ကခငျြလှတျမွောကျရေး တပျမတျော (KIA)တို့ ဖွဈပှားနသေညျ့ တိုကျပှဲဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြား ပွောပွခကျြ အရသိရသညျ။ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျအတှငျး တိုကျပှဲမြားဆကျလကျ ပွငျးထနျလာနိုငျကွောငျး၊ ကိုဗဈ ကာကှယျထိနျးခြုပျသညျ့ အခြိနျကာလအတှငျး တပျမတျောမှ တိုကျပှဲမြားရပျတနျ့ထားမညျဟု ကွညောခဲ့သျောလညျး တိုကျပှဲ မြားဆကျလကျဖွဈပှားနကွေောငျးလညျး ဆရာနောငျလတျက ပွောသညျ။
ကှတျခိုငျမွို့နယျအတှငျး ယခုရကျပိုငျး တပျမတျောမှစဈအငျအား ရာဂဏနျး ထပျမံဖွညျ့တငျးကာ ဒသေအတှငျး လှုပျရှားနေ ကွောငျး ဒသေခံမြားပွောပွခကျြအရသိရသညျ။ အဆိုပါ သတငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး သြှမျးသံတျောဆငျ့မှ တပျမတျော သတငျး မှနျပွနျကွားရေးဌာန နှငျ့ KIA ကို အကွိမျကွိမျ ဖုနျးဆကျချေါဆိုခဲ့သျောလညျး မရရှိခဲ့ပေ။ https://burmese.shannews.o rg/archives/17166
၈။ သခငျစဈကုမ်ပဏီကို တရားစှဲဆိုထားသညျ့အမှု တရားလိုသကျသေ ရဲစခနျး၏ထှကျဆိုမှုကို အားရကနြေပျမှု မရှိဟုဆို
ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမွို့အခွစေိုကျ မွဈကွီးနားသတငျးဂြာနယျ မှ သခငျစဈကုမ်မဏီကို တရားစှဲဆိုထားထားသညျ့အမှု ဇှနျလ ၁၅ ရကျနေ့ ရုံးခြိနျးတှငျ တရားလိုသကျသဖွေဈသော ရဲစခနျး၏ထှကျဆိုခကျြအပျေါ ကနြေပျအားရမှုမရှိကွောငျး တရားလို သတငျးထောကျ မှနျးမှနျးပနျ ထံမှ သိရသညျ။
“ဒီနရေုံ့းခြိနျးကို လုံးဝအားမရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ အမှုစဈထှကျဆိုတဲ့အခကျြမှာ အခငျးဖွဈတဲ့နကေ့ဖမျးထားတဲ့ အသံဖိုငျ ကို အခငျးဖွဈတဲ့နမှေ့ာ မပေးခဲ့ဘဲနဲ့ နောကျကမြှပေးတယျဆိုတဲ့အခကျြတှဖွေဈနတေယျ။ နောကျတဈခကျြက ကမြတို့အဲနေ့ က သကျသခေံ ပစ်စညျးတှကေိုအပျတယျ။ ရဲစခနျးကလကျမခံဘူး။ သူတို့ကပွောတာ နောကျမှအပျပါတဲ့။ ကနြျောတို့ချေါတဲ့ ခြိနျမှ အပျရမယျ။ ခုအပျလို့မရဘူးဆိုပွီး ခုမအပျသေးနဲ့ဆိုပွီးပွောတယျ။ ပွီးတော့အဲနကေ့လညျး အမှုကိုစောစောမဖှငျ့ပေး ဘူး။ ကအြေေးဖို့ဘဲထပျခါထပျခါလာပွောနတော။ အဲခြိနျကတြော့ နလေ့ညျ ၁၁ နာရီကတညျးကနေ ည ၁၀ နာရီလောကျမှ အိမျပွနျရတယျ။ ပွီးလို့ရှိရငျ အသေးစိတျအခကျြလကျကိုလညျး တရားရုံးရောကျမှပွော ဒီမှာက အသေးစိတျအခကျြလကျ တှကေို မရေးလညျးရတယျ မှတျမိသလောကျဘဲပွော အဲလိုတှပွေောတဲ့ခြိနျကတြော့ မပါနိုငျတဲ့အခကျြလကျတှရှေိသှားတာ ပေါ့နျော။ အဲအမှုဖွဈတဲ့နမှေ့ာ ကမြသတငျးတှမှော ဘယျလိုဖွထေားတယျ။ အဲနကေ့ ကမြအကြီ င်ျ ကွယျသီးက ဘယျလိုပွုတျ ထားတယျ မပွုတျထားဘူးဆိုတာ အဲနကေ့မြတို့ ရှနေ့အေပွငျ တဈခွားသတငျးထောကျတှလေညျး အားလုံးတှမှေ့ာပါ။ ခုက ကမြကဘဲ အဲဒီကွယျသီးတှကေို စှဲဖွုတျထားတဲ့အနထေားမှာရှိနတေယျ။”ဟု မှနျးမှနျးပနျ က ပွောသညျ။
“သူ့ရဲ့ဥပဒကွေောငျးအရဆို အမှုနဲ့ပတျသကျတဲ့ဟာကို တရားလိုဘကျက စပေးကတညျးက ရဲတှယေူခဲ့ရမှပေါ့။ ယူဖို့လညျး ကနြျောတို့အကုနျလုံးက ပွောတယျ။ အဲဒါကိုသိမျးပေးပါ ဒါအမှုအတှကျ သကျသခေံပစ်စညျးဟုတျတယျ စတိုငျကတညျးက သိမျးခိုငျးတာသူတို့က မသိမျးဘူး။ အဲတော့ ဒီနတေ့ရားရုံးမှာလာထှကျတဲ့ခြိနျကတြော့ မပေးပါဘူးဆိုပွီး လာထှကျကွတာ။ အဲတော့ အမှုဖွဈပွီး တဈပတျ ဒါမှမဟုတျ ၁၄ရကျလောကျကွာတဲ့ခါကမြှ ကနြျောတို့ကဘဲ အဲသကျသခေံပစ်စညျးကို ရဲကို အပျ တယျပေါ့။ အမှုဖွဈပွီးအဲလောကျကွာမှအပျတဲ့ပစ်စညျးက အစဈအမှနျတဈကယျ အသံဖမျးထားတာ ဟုတျမဟုတျ အကြီ င်ျပွဲ တာကလညျး သူတို့ပွသာနာဖွဈခဲ့တာ ဟုတျမဟုတျကိစ်စမှာ သံသယဖွဈစရာ ဖွဈလာတာပေါ့ဗြာ”ဟု တရားလိုဘကျမှ ရှနေ့ဖွေဈသညျ့ တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဦးတငျထှနျးသိနျးက ပွောသညျ။ ရဲစခနျးဘကျမှ လကျမခံခဲ့သညျ့ အဆိုပါ သကျသခေံပစ်စညျးသညျ ရဲစခနျး၏ပေါ့ဆမှုသာ ဖွဈသညျ့အတှကျ ၎င်းငျး၏အမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး နဈနာမှုမရှိစရေနျ အကောငျး ဆုံးညှိနှိုငျးဆောငျရှကျသှားဖို့ ရှိကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၆ ရကျနေ့ သခငျစဈကုမ်မဏီက မွဈကွီးနားသတငျးဂြာနယျမှ သတငျးထောကျနှဈဦးအား ဂြာနယျတှငျပါရှိသညျ့ သတငျးတဈပုဒျနှငျ့ပတျသကျပွီး ဆှေးနှေးရနျအတှကျဟုဆိုကာ မွဈကွီးနားသတငျးဂြာနယျရုံးမှ ဝိုငျးမျောမွို့ရှိ ၎င်းငျးတို့ကုမ်ပဏီရုံးခနျးသို့ ချေါဆောငျပွီးနောကျ အမြိုးသမီးသတငျးထောကျဖွဈသညျ့ မှနျးမှနျးပနျအား ခွိမျး ခွောကျပွောဆိုကာ ဂြာနယျဖွငျ့ ပါးရိုကျခဲ့ပွီး သတငျးထောကျ အဂအြေား ထိုငျထတဈသိနျးလုပျရနျ ခွိမျးခွောကျစခေဲ့သညျ့ အတှကျ မွဈကွီးနား သတငျးဂြာနယျမှ သခငျစဈကုမ်မဏီအား အသရဖေကျြမူ ပုဒျမ ၅၀ဝ ဖွငျ့ စတငျတရားစှဲဆိုခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ မညျသူမဆို အခွားတဈဦးဦးအား အသရေဖကျြမူ တဈခုခုကြူးလှနျလြှငျ ထိုသူအား ထောငျဒဏျ (၂) နှဈထိ ခမြှတျ နိုငျသညျ့အပွငျ ငှဒေဏျဖွဈစေ၊ ဒဏျ နှဈရပျလုံးဖွဈစေ ခမြှတျနိုငျသောပုဒျမဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ https://burmese.kac hinnews.com/2020/06/16/% e1%80%9e%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%ba%e1
ရခိုငျပွညျနယျ အမျးမွို့နယျ ဒလကျခြောငျးကြေးရှာအုပျစုက ရှမျးကုနျးနဲ့ မင်ျဂလာဒုံရှာက ခငျြးတိုငျးရငျးသား လူဦးရတေဈ ထောငျကြျောကို တပျမတျောက ဆနျသယျယူခှငျ့ကနျ့သတျထားတာ ခွောကျလကြျောပွီဖွဈလို့ အဲဒီရှာတှမှော ဆနျရိက်ခာ ပွတျလပျနပေါတယျ။ ဆနျသယျခှငျ့ အပိတျခံထားရတာကွောငျ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသား တဈထောငျကြျောဟာ စားစရာဆနျမရှိဘဲ အရေးပျေါ ရိက်ခာလိုအပျနတေယျလို့ ခငျြးလူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အကူအညီပေးရေးအဖှဲ့ (CHAT)က ဆလိုငျး ဝငျးမောငျ က ပွောပါတယျ။ “ကြေးရှာကလူတှကေ ပိတျဆို့ခံထားရတာ ကွာတဲ့အခါကတြော့ စားဖို့သောကျဖို့က ဆနျတှကေ မရှိတဲ့ အတိုငျးအတာကို ရောကျနတေယျ၊ ခုကရှာတှမှော ဆနျလညျးဝယျလို့မရဘူး၊ အခုရှာတှမှော ငှကျပြောသီးတှေ၊ အသီးအရှကျတှေ စားပွီးနနေရေတယျဗြ၊ ကြေးရှာအားလုံးနီးပါး ပိတျဆို့ခံထားရတယျ၊ အရေးပျေါလိုအပျနတောကတော့ ရှမျးကုနျးကြေးရှာနဲ့ မင်ျဂလာဒုံကြေးရှာ အဲမှာအဓိက လိုအပျနတေယျ” ရှမျးကုနျးကြေးရှာမှာ လူဦးရေ ၆၀ဝ ကြျောနဲ့ မင်ျဂလာဒုံ ကြေးရှာမှာ လူဦးရေ ၅၀ဝ ကြျောရှိတယျလို့ ဆလိုငျးဝငျးမောငျက ပွောပါတယျ။
ဒလကျခြောငျးကြေးရှာအုပျစုထဲမှာ ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှေ နထေိုငျတဲ့ရှာ ၃၆ ရှာနဲ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားတှေ နထေိုငျတဲ့ရှာ ငါး ရှာလောကျရှိပါတယျ။ ဒီကြေးရှာနှဈရှာကိုပဲ ဖုနျးအဆကျအသှယျရတာကွောငျ့ မွပွေငျအခွအေနသေိရပွီး အခွားကြေးရှာ တှေ အခွအေနကေိုတော့ အသေးစိတျ မသိရသေးဘူးလို့ CHAT အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။ ဒလကျခြောငျးကြေးရှာအုပျစုဟာ အမျးမွို့ကို ကုနျးလမျး၊ ရလေမျးနဲ့ သှားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနှဈ ဇနျနဝါရီလဆနျးကစလို့ AA အဖှဲ့ကို ရိက်ခာရောကျသှားမှာ တားမွဈတာဆိုတဲ့ တပျမတျောဘကျက အကွောငျးပွခကျြနဲ့ ရိက်ခာသယျယူခှငျ့ နဲ့ သှားလာခှငျ့တှေ ပိတျထားတာလို့ ဒသေခံ တှကေပွောပါတယျ။ ရိက်ခာအရေးပျေါ လိုအပျနတေဲ့ ဒသေခံ ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှကေို အကူအညီပေးနိုငျဖို့ ခငျြးအရပျဘကျ အဖှဲ့တှေ ပွငျဆငျနေ ကွပါတယျ။ ခငျြး စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြား အရေးပျေါကူညီရေးနဲ့ ပွနျလညျထူထောငျရေးကျောမတီ RRCCI က ပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ မိုငျနနျးဝေ ပွောသှားတာပါ။ ရှာတှထေဲက ခငျြးလူငယျတခြို့ကတော့ ရနျကုနျကိုထှကျပွေး ခိုလှုံနတောတှလေညျး ရှိတယျလို့ ခငျြးအရပျဘကျအဖှဲ့တှကေ ပွောပါတယျ။
တပျမတျောက ရိက်ခာသယျယူခှငျ့ ပိတျထားတယျဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ဗိုလျမှူး ခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးကို RFA ဖုနျးနဲ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးပမေယျ့ လကျခံဖွကွေားတာမရှိပါဘူး။ AA နဲ့ တပျမတျောတို့ တိုကျပှဲ တှကွေောငျ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမှာစဈဘေးဒုက်ခသညျ ၉၀ဝဝ ကြျောရှိသလို ရခိုငျပွညျနယျမှာလညျး ခငျြးလူဦးရေ ခွောကျထောငျကြျော ဒုက်ခရောကျနတေယျလို့ အရပျဘကျအဖှဲ့တှကေ ပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာဆိုရငျ မငျးပွား၊ အမျး၊ မွပေုံနဲ့ မွောကျဦးမွို့နယျတှမှော ခငျြးတိုငျးရငျးသား စဈဘေးဒုက်ခသညျတှရှေိပွီး အမျးမွို့နယျမှာတော့ အမြားဆုံးရှိတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/urgent-food-supply-required-for-thousand-of-ann-refug ees–06172020055447.html
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး နောငျခြိုမွို့နယျ ဂုတျတှငျး တှငျ ယနေ့ မနကျ ၃ နာရီ ကြျောက ခရီးသညျ တငျယာဉျ express ကား တစီး ခြောကျထဲသို့ ထိုးကကြာ ယာဉျမောငျးတဦး နှငျ့ ခရီးသညျ ၂ ဦး သဆေုံးခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။“ယာဉျမောငျးနဲ့အမြိုးသားတဦးကတော့ ဖွဈတဲ့နရောမှာ ပှဲခငျြးပွီးသတေယျ။ နောကျအမြိုးသမီးတယောကျကတော့ ဆေးရုံ မှာဆုံးတယျ”ဟု သှားရောကျကူညီခဲ့သညျ့ ကမျးလငျ့လကျမြား လူမှုကူညီရေးအသငျး (နောငျပိနျ) မှ ဦးနအေောငျက သြှမျးသံတျောဆငျ့သို့ ပွောသညျ။ အဆိုပါ ခရီးသညျယာဉျတှငျ ယာဉျမောငျးအပါဝငျ စုစုပေါငျး ၁၇ ဦး လိုကျပါခဲ့ပွီး၊ ၃ ဦး
သဆေုံးကာ ၊ ၅ ဦး ဒဏျရာပွငျးထနျကွောငျး၊ ကနျြ သူမြားမှာ ဒဏျရာမပွငျးထနျကွောငျးလညျး ဦးနအေောငျ က ဆိုသညျ။“ ဒဏျရာပွငျးထနျတဲ့ ၅ ဦးကိုတော့ ကနြျောတို့အသငျးက ပွငျဦးလှငျ ဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ကနျြ သူတှကေတော့ နောငျခြို ဆေးရုံမှာပါ”ဟု ဦးနအေောငျ က ပွောသညျ။ ထို ခရီးသညျယာဉျ သညျ မကှေးမွို့မှ လားရှိုးမွို့သို့သှားမညျ မငျးသားကွီး express ကားဖွဈကွောငျး၊ ကုနျးအဆငျးတှငျ ကားဘရိတျပေါကျမှုကွောငျ့ ရှသေို့ထိုးဆငျးသှားကွောငျး သှားရောကျကူညီ သညျ့ လူမှုရေးအသငျးမြားကပွောသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ရကျပိုငျးက နောငျခြိုမွို့နယျ ဂုတျတှငျး တှငျ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးမှုကွောငျ့ တောငျကခြောငျးရကွေီးကာ ကားလမျးမြားခြျောခဲ့ကွောငျး၊ ယခုရကျပိုငျး ထို ဂုတျတှငျးတှငျ အတကျအဆငျး သတိထားပွီး မောငျးရနျ လိုအပျကွောငျး လညျး ကားသမားမြား က ပွောသညျ။ “ဒီရကျပိုငျး မိုးတှေ အရမျးရှာတယျ။ တောငျတကျတောငျဆငျး ကားလမျး တှခြေျော တော့ သတိနဲ့မောငျးဖို့လိုတယျ။ ဂရုစိုကျမောငျးဖို့ လိုပါတယျ”ဟု ကားသမား တဦးဖွဈသညျ့ စိုငျးလောဝျ က ပွောသညျ။
မိုးရှာသှနျးမှုကွောငျ့ တောငျကရြမြေား ယခငျကထကျ ပိုကလြာကွောငျး၊ လမျးမြားခြျောမှုကွောငျး ယခုရကျပိုငျး ကားကွီး၊ ကားသေးမြား သှားလာမှုခကျခဲနကွေောငျး၊ လမျးမြားသညျ ယခငျကဲ့သို့ မဟုတျတော့ကွောငျးလညျး ကားသမားမြားက ပွောသညျ။ https://burmese.s hannews.org/archives/17134
၁၁။ ပွညျနယျအစိုးရ၏ လယျယာမွဖေျောထုတျမှုကွောငျ့ လီဒိုလမျးမပျေါကြေးရှာ ၂ ခု အငွငျးပှားဖှယျရှိနေ
အစိုးရ၏ ဟူးဟောငျ့ခြိုငျ့ဝှမျးဒသေ လီဒိုလမျးမပျေါရှိ စံပွ ရှပွေ့ောငျးကြေးရှာသဈအတှကျ မွယောအသဈဖျောထုတျမှုကို အစိုးရက နှောငျးမီကြေးရှာတှငျ လုပျဆောငျနသေောကွောငျ့ ကြေးရှာ ၂ ခုကွား ပဠိပက်ခဖွဈလာမညျ့အခွအေနရှေိနသေဖွငျ့ အမွနျဖွရှေငျးပေးရနျ တောငျးဆိုနကွေသညျ။ ဖားကနျ့မွို့နယျ မွယောဖျောထုတျရေးကျောမတီက စံပွကြေးရှာအတှကျ မွဧေက ၂၀ဝ ကြျောကို ၎င်းငျးကြေးရှာနှငျ့ မိုငျ ၂၀ ကြျောကှာဝေးသော နှောငျးမီကြေးရှာတှငျ လှနျခဲ့သညျ့မတျလ ကတညျးက စတငျဖျောဆောငျခဲ့ရာ နှောငျးမီဒသေခံမြားက ကနျ့ကှကျနဆေဲဖွဈသညျ။
လယျယာမွဖေျောထုတျပေးရနျ နှောငျးမှီကြေးရှာဒသေခံမှ တောငျးဆိုခွငျးမရှိသျောလညျး စံပွကြေးရှာကသာ တောငျးဆိုခဲ့ ခွငျးဖွဈသညျ။ သို့သျော ပွညျနယျအစိုးရ၏ ညှနျကွားစာတှငျ ‘နှောငျးမီစံပွကြေးရှာ’တှငျဟု ကြေးရှာ ၂ ခုကိုရောထှေးစှာ ဖျောပွခဲ့သဖွငျ့ ကြေးရှာ ၂ ခုကွား အငွငျးပှားဖှယျ အခွအေနဖွေဈနသေညျဟု ဆိုသညျ။ “ညှနျကွားစာမှာက ‘နှောငျးမှီစံပွ ကြေးရှာ’လို့ စာထှကျလာတယျ။ စာထဲမှာကိုက မွနေရောရှာခိုငျးတာပေါ့။ ညှနျကွားစာက ဝနျကွီးရုံးကနေ မွို့နယျအုပျခြုပျ ရေးမှူး ရုံးကထှကျလာတာပေါ့။ အဲ့မှတဆငျ့ ကနြျောတို့ကို ကှငျးဆငျးခိုငျးတယျ။ နောကျစံပွ ကြေးရှာအနီးတဝိုကျမှာက မွနေရော လှတျတာမရှိဘူးလေ။ စာမှာကိုက နှောငျးမီပါနတေော့ အဲ့ဒီကို ပွနျရှာတာပေါ့။ အဲ့မှာက မွလှေတျမွလေပျရှိနေ တော့ တငျပေးလိုကျတာပေါ့။ လကျရှိအခွအေနမှောလညျး စံပွတောငျသူအတှကျဖွဈတယျလို့၊ နောကျ နှောငျးမှီတောငျသူ တှေ အတှကျဖွဈတယျလို့ ၂ ဦး စလုံးကို တိတိကကြ ခမြှတျပေးတာမရှိသေးပါဘူး”ဟု ဖားကနျ့မွို့နယျ စိုကျပြိုးရေးဦးစီးမှူး ဦးဇျောဇျောလငျးက ပွောဆိုသညျ။
လယျယာမွဖေျောထုတျရေးအတှကျ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးမြားက ကှငျးဆငျးစဈဆေးခဲ့ခြိနျ ဒသေခံမြားအတှကျ ဆောငျရှကျ ပေးမညျ့အကွောငျး ပွောဆိုခဲ့သောကွောငျ့ အဆိုပါလုပျငနျးကို ခှငျ့ပွုပေးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု နှောငျးမီဒသေခံ ဦးဆိုငျးအောငျ က သတငျးဌာန KNG ကိုပွောသညျ။
“ဒီမှာလုပျငနျးစတငျခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ မွို့နယျကနေ ကှငျးဆငျးစဈဆေးခဲ့တယျ။ ကနြျော တို့ ဒသေခံတှကေ ဒီနရောမှာ မလုပျဖို့ ငွငျးပယျခဲ့တာရှိတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒသေခံတှကေ မွလှေတျမွလေပျ လြှောကျထားတဲ့နရော ဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က နိုငျငံတျောရံပုံငှကေထြားတဲ့အတှကျ လုပျရငျလညျးဒသေခံတှေ အတှကျသာ ဖွဈလိုပွောခဲ့တယျ။ အခုက လယျယာမွဖေျောထုတျတာကလညျး ပွီးခါနီးတော့ ကြေးရှာသားတှအေတှကျ မဟုတျဘဲ စံပွကြေးရှာဘကျက တောငျသူ တှေ အတှကျလုပျပေးတာဖွဈတယျလို့ ပွောလာတယျ။ အဲ့တော့ အခုဖျောထုတျ ထားတဲ့ မွယောတှကေ ခှဲဝယျယူလို့လဲမရ ပွဿနာတကျနတောပေါ့” ဟုပွောသညျ။
အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး လီဆူတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး ဦးအားတီယောဟနျက “ကနြျောတို့ သိထားသလောကျပွော ရမယျဆိုရငျ စံပွကြေးရှာနဲ့ နှောငျမီဒသေခံပွညျသူတှနေဲ့ ဘာကွောငျ့ ပွသနာဖွဈလာရသလဲဆိုတော့ အောကျခွမှော အစိုးရ က လယျယာမွဖေျောထုတျပေးဖို့ တာဝနျပေးလိုကျတဲ့သူရဲ့ ပွတျသားမှုမရှိတဲ့တဈကွောငျး၊ ပွညျနယျအစိုးရကလညျး နရော ကွိုတငျရှာထားခွငျးမရှိဘဲနဲ့ ပွညျသူတောငျးခံထားတဲ့ဟာကို ဘတျဂကျြ ခပြေးလိုကျတယျ။ အခြိနျအခါအရဆို မသုံးလို့မရ တော့ဘူး။ အဲ့တော့ ခပြေးတဲ့အခါမှ ဟိုနရော ရှာလိုကျနဲ့ ပတျခြာလညျသှားတဲ့အခါ နောကျဆုံး နှောငျးမှီမှာ သှားဖျောတယျ။ အဲ့မှာမဖျောခငျ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးနဲ့ ဒသေခံတှကေို သခြောညိနှိုငျးတိုငျပငျရမှာဖွဈတယျ။ အခုက မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ အလုပျမလုပျတဲ့အတှကျ ဖွဈလာတဲ့ ပွဿနာ ဖွဈတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ဟူးကောငျးခြိုငျ့ဝှမျးဒသေ လီဒိုလမျးကြေးရှာမြားတှငျ ဒသေခံမြားနှငျ့ ယုဇနကုမ်ပဏီတို့ကွား မွယောပွဿနာဖွဈနရောမှ ယခု အခြိနျတှငျ အစိုးရ၏ညှနျကွားခကျြကွောငျ့ ကြေးရှာ ၂ ခုကွားမွယောအငွငျးပှားမှု ဖွဈလာနိုငျခွရှေိနသေညျဟု ဒသေခံမြား က ပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/17/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e 1%80%ba%e1
၁၂။ မူးယဈဆေးဝါးပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားအတှကျ ထားစရာနရောလုံလောကျမှုမရှိတော့ ဟု မှနျပွညျသဈပါတီ သထုံခရိုငျ တာဝနျရှိသူ ပွော
မူးယဈဆေးဝါးအန်တရယျကို အမြိုးသားရေးတာဝနျတဈရပျအနဖွေငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီက ဖမျးဆီးအရေးယူလကျြရှိရာ ၎င်းငျး၏ ထိနျးခြုပျဒသေတဈခုဖွဈသော သထုံခရိုငျအတှငျး ပွဈမှုကြူးလှနျသူတရားခံမြားအတှကျ ထိနျးသိမျးထားစရာနရောလုံ လောကျမှုမရှိတော့ ဟု မှနျပွညျသဈပါတီသထုံခရိုငျတာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောကွားသညျ။
မှနျပွညျသဈသတငျးစဉျ Online မှ မှနျဘာသာဖွငျ့ ဖွနျ့ခြိခဲ့သော “မှနျအမြိုးသားအန်တရယျ မူးယဈဆေးဝါး” Documentary အပိုငျး(၂)တှငျ မူးယဈဆေးဝါးရောငျးဝယျဖွနျ့ဖွူးသူမြားနှငျ့ သုံးစှဲသူမြားအားဖမျးဆီးအရေးယူထားမှုအပျေါ မှနျပွညျသဈပါတီ သထုံခရိုငျမှ ဝနျထုတျဝနျပိုးဖွဈလာရကွောငျး ခရိုငျအလုပျအမှုဆောငျကျောမတီဝငျ နိုငျဇျောမငျးဦးက ပွောဆိုထားသညျ။ နိုငျဇျောမငျးဦးက “လကျကွီးသမားတှကေိုပဲ ဖမျးခငျြပါတယျ၊ လူမြားမြားဖမျးမိရငျ ကနြျောတို့ဆီမှာ ထိနျးသိမျးဖို့နရောအတှကျ အခကျအခဲ တျောတျောလေးရှိလာတယျ၊ ဖမျးဆီးမိလာရငျ နစေရာနရောအတှကျ အခကျအခဲဖွဈလာရတာကတဈမြိုး သူတို့ စားရေးသောကျရေးကိစ်စတှကေိုလညျး ပါတီအနနေဲ့တာဝနျကွီးလာတဲ့အတှကျ တခါတလမှော အဖမျးအဆီးတှမေလုပျဖို့ တားထားလိုကျရတယျ သုံးစှဲတဲ့အဆငျ့လောကျပဲဆိုရငျ ဖမျးမလာပါနဲ့တော့လို့၊ ဘာဖွဈလဲဆိုရငျ ဖမျးလာပွီးဆိုရငျ အိပျဖို့ နရောမပေးနိုငျဘူး ထားဖို့အခနျးနရောလညျးမရှိဘူး နောကျပွီး သူတို့ကို ကြှေးမှေးတဲ့ကိစ်စကလညျး တာဝနျတျောတျောကွီး လေးလာတယျ” ဟု ဆိုသညျ။
အထူးအဖွငျ့ ကြေးရှာမြားတှငျ ၁၀ နှဈနှငျ့အထကျ ခလေးလူငယျမြား သုံးစှဲနကွေသညျကို ကြေးရှာအကွီးအကဲမြား ပွောဆို ဆုံးမသျောလညျး ထိရောကျမှုမရှိသညျ့အတှကျ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြားအနဖွေငျ့ အရေးယူပေးဆောငျရှကျပေးစလေို ကွောငျး အလားတူ ကော့မိတျကြေးရှာ ရပျမိရပျဖ နိုငျစိုးခိုငျက ပွောထားသညျ။
နိုငျစိုးခိုငျက “အမြားအားဖွငျ့တော့ မိဘတှေ က ရပျရှာမှာမရှိကွဘူး၊ အဖိုးအဖှားတှနေဲ့ နကွေတာမြားတော့ ဒီလိုကိစ်စတှေ အဖွဈမြားလာတာလို့လညျး ဆိုနိုငျတယျ၊ ခလေးတှေ စာရိတ်တခြို့ယှငျးလာတယျ၊ ပညာရေးအပိုငျးမှာလညျး ထိခိုကျလာ တယျ၊ ဒီမှာက တျောတျောမြားဆိုမှ တျောတျောမြားမြား ကို ဖွဈနတော အဲဒါကွောငျ့ ထိရောကျပွတျသားစှာ အရေးယူစေ ခငျြပါတယျ” ဟု ဆိုသညျ။
အဆိုပါ “မှနျအမြိုးသားအန်တရယျ မူးယဈဆေးဝါး” Documentary အပိုငျး(၂) တှငျ မှနျပွညျသဈပါတီ သထုံခရိုငျအတှငျး မူယဈဆေးဝါးပွဈမှုဖွငျ့ အရေးယူခံထားရသူမြား၏ နောကျခံပုံရိပျမြား၊ အငျတာဗြူးမြားနှငျ့အတူ မူးယဈဆေးဝါးကွောငျ့ နောကျဆုံးရလိုကျသညျ့သငျခနျးစာမှာ “နောငျတ”ဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားသညျကို တှရှေိ့ရသညျ။ အလားတူ မှနျပွညျသဈ ပါတီ မျောလမွိုငျခရိုငျနှငျ့ ထားဝယျခရိုငျ အုပျခြုပျရေးဒသေမြားတှငျလညျး မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ပတျသကျ၍ ဆေးစှဲသူမြား ပွနျ လညျကုသရေး၊ ပွဈမှုကြူးလှနျသူတရားခံမြား ထိနျးသိမျးထားရှိရနျလုံခွုံသောနရောနှငျ့ စားနပျရိက်ခာမြားရရှိရေးအတှကျ ဝနျထုပျဝနျပိုးမြား ဖွဈလာသညျဟု သတငျးရရှိသညျ။ http://burmese.monnews.or g/2020/06/16/%e1%80%99% e1%80 %b0%e1%80%b8%e1%80%9a%e1%
သြှမျးပွညျ တောငျပိုငျး လငျးခေးခရိုငျ မိုးနဲမွို့နယျအတှငျး RCSS/SSA ၏ ကိုဗဈ-၁၉ ကွိုတငျကာကှယျရေး လုပျငနျးစဉျကို ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး နှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက တားမွဈပိတျပငျကွောငျးစုံစမျးသိရသညျ။
ဇှနျ ၁၈ ရကျ မနကျ ၉ နာရီက သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျတပျမတျော (RCSS/SSA) ၏ ကနျြးမာ ရေးဝနျထမျးမြားက မိုးနဲမွို့နယျအတှငျးရှိ ဒသေခံပွညျသူမြားအား ကိုဗဈ-၁၉ ကွိုတငျကာကှယျရေး လုပျငနျးစဉျ ဆောငျ ရှကျနစေဉျ လှယျဝပျကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၂ ဦး တို့က လာရောကျတားမွဈခဲ့ကွောငျး RCSS/SSA ဘကျက ဆိုပါသညျ။“ဒီနမေ့နကျ ကနြျောတို့ ကိုဗဈ-၁၉ ကွိုတငျကာကှယျရေးလုပျငနျးစဉျ အဖှဲ့ကို လာပွီးဟနျ့တားတယျဆိုတာ ဟုတျပါတယျ။ ကနြော့အထငျတော့ ကနြျောတို့ RCSS/SSA ကို နာမညျ မရစခေငျြတဲ့သဘောလားမသိဘူး”ဟု RCSS/SSA ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။
RCSS/SSA ဆေးဝနျထမျးအဖှဲ့သညျ ကြိုငျးတောငျးမွို့အသှားလမျး တနရောတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ သံသယလူနာရှိ၊ မရှိစဈဆေး ခွငျးနှငျ့ ကွိုတငျကာကှယျနညျး အသိပညာဟောပွောပေးခွငျး ဆောငျရှကျနစေဉျ လှယျဝပျကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး နှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ ၂ ဦး တို့က ကားဖွငျ့လာပွီး၊ ခှငျ့ပွုခကျြမရရှိပါက ကိုဗဈ-၁၉ ကွိုတငျကာကှယျရေးလုပျဆောငျခွငျး မပွုရနျ တားမွဈ ပိတျပငျခဲ့ကွောငျး RCSS/SSA ၏သတငျးမီဒီယာ ဝကျဆိုဒျတှငျ ရေးသားဖျောပွထားသညျ။ ထို့အပွငျ အမိနျ့မရပါက ထို နရောတှငျ ကိုဗဈ -၁၉ ကွိုတငျကာကှယျရေး လုပျငနျးစဉျမြား ဆောငျရှကျခွငျးမပွုရနျ နှငျ့ ပွနျလညျဆုတျခှာပေးရနျ ပွောဆို ခွိမျးခွောကျခဲ့ရာ RCSS/SSA ၏ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားသညျ ထိုနရောမှ ပွနျလညျဆုတျခှာပေးခဲ့ရကွောငျးလညျး RCSS/SSA ၏ ဝကျဆိုဒျတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ဇှနျ ၁၆ ရကျနတှေ့ငျ ကိုဗဈ-၁၉ ကာလအတှငျး ထိနျးခြုပျရေး ၊ကုသရေး နှငျ့ ပတျသတျပွီး RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရအဖှဲ့တို့ သညျ Vedio Conferencing အစညျးအဝေး ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ ဧပွီလ ၇ ရကျ တှငျလညျး သြှမျးပွညျ တောငျပိုငျး မိုငျးပနျမွို့နယျ တှငျ RCSS/SSA ၏ ဆေးဝနျထမျးမြားကို အစိုးရတပျမတျောက တားမွဈခဲ့ပွီး၊ RCSS/SSA ၏ ထောကျပံ့မှုကို ယူပါက ဒသေခံပွညျသူမြားကို ဖမျးဆီးအရေးယူမညျဟုလညျး ခွိမျးခွောကျခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ https://bu rmese.shannews.org/a rchi ves/17173
ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျဖွူမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနမှ စာရေးဝနျထမျးဖွဈသူ အသကျ ၄၀ နှဈခနျ့ရှိ ဦးစိုးမငျး မှာ အမညျမသိ လူတစုက ချေါဆောငျသှားပွီးနောကျ အသတျခံရကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့က အတညျပွုပွောကွားသညျ။
ကြောကျဖွူမွို့မ စခနျးမှူး ဒုရဲမှူး ကြျောဇောက “ကနြျောတို့ ဇှနျလ ၁၇ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးမှာ တောငျရှညျကြေးရှာသို့ သှားတဲ့ ကားလမျးမဘေးမှာ လူတယောကျ သနေတေယျဆိုတာ သတငျးရလို့ သှားကွညျ့တယျ။ ဘယျသူ၊ ဘယျဝါ ဖွဈတယျဆိုတာ ဆေးရုံပို့ပွီး စဈဆေးတဲ့အခါ စိုငျခွုံကြေးရှာက ထှအေုပျစာရေး ကိုစိုးမငျးထှနျး ဖွဈတယျဆိုတာ သိရတာ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ အသတျခံရသူ ဦးစိုးမငျးထှနျးမှာ ကြောကျဖွူမွို့နယျ စိုငျခွုံကြေးရှာမှ ရပျ/ကြေး စာရေးတဦး ဖွဈပွီး ဇှနျလ ၁၆ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက မိသားစုနှငျ့အတူ နအေိမျ၌ အိပျနစေဉျ အမညျမသိ လူတစုမှ ချေါဆောငျသှားပွီး နောကျနေ့ နံနကျ လယောဉျကှငျး အနီးရှိတောငျရှညျကြေးရှာသှားသညျ့ ကားလမျးဘေးတှငျ ၎င်းငျး၏ အလောငျးအား တှရှေိ့ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့က ဆိုသညျ။
“သူ့မိနျးမက ပွောတာ အဲဒီည ၁၂ နာရီလောကျမှာ အမညျမသိ လူတစု ရောကျလာပွီး အတငျးအဓမ်မ ဖမျးချေါသှား တယျလို့ ပွောတယျ။ နောကျနေ့ မနကျမှာ ဒဏျရာနဲ့ သူ့အလောငျးတှတေ့ာ”ဟု စခနျးမှူး ဒုရဲမှူး ကြျောဇောက ဆကျလကျ ပွောကွားသညျ။ အသတျခံရသညျ့ ဦးစိုးမငျးထှနျး၏ အလောငျးအား စဈဆေးရာ ဦးခေါငျး၊ ဝမျးဗိုကျ၊ ဝဲဘကျ လကျဖြံတို့တှငျ ညိုမဲ ဒဏျရာအသီးသီး ရရှိခဲ့ပွီးသဆေုံးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ကြောကျဖွူမွို့မရဲစခနျးမှသိရသညျ။ အသတျခံရသညျ့ အကွောငျး ရငျးနှငျ့ကြူးလှနျသညျ့တရားခံမြားကို ရဲတပျဖှဲ့မှ ယခုတိုငျဖမျးဆီးနိုငျခွငျး မရှိသေးပေ။ အဆိုပါ သဆေုံးမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဦးစိုးမငျးထှနျး၏ ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါမဝသေနျးက တရားလိုလုပျ တိုငျတနျးပွီး ကြောကျဖွူမွို့မ ရဲစခနျးတှငျ ပ/၂၁၅ / ၂၀၂၀ ၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၀၂ / ၄၃ တို့ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ကာ တရားခံဖမျးဆီးနိုငျရေး ရှာဖှစေုံစမျးလြှကျ ရှိကွောငျးသိရသညျ။ https:/ /burma.irrawaddy.com /news/2020/06/18/224902.html
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျ မတျခြီနူရှာ အနီးတှငျ ပုတျပှနသေညျ့ အမြိုးသမီး ရုပျအလောငျး (၂)လောငျးကို ယနေ့ မနကျပိုငျးက တှရှေိ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
အဆိုပါ အမြိုးသမီး အလောငျး ၂ လောငျး သညျ လားရှိုးမွို့နယျ တာပုံကြေးရှာအုပျစု မတျခြီနူ ရှာသှားလမျးဘေးရှိခွုံ တခုထဲ တှငျး တှရှေိ့ကွောငျး၊ သဆေုံးသူမြား၏အလောငျးမှာ ပုတျပှနပွေီဖွဈသဖွငျ့ မညျသူမညျဝါဖွဈကွောငျး သခြောမသိရှိရ ကွောငျး လားရှိုးလူငယျမြားလူမှုကူညီရေးအဖှဲ့မှ စိုငျးဝသုနျထှနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။
“ဘာကွောငျ့ အသတျခံရတယျဆိုတာကိုတော့ သခြောမသိရသေးဘူး။ နောကျ အလောငျးက ပုတျပှပွီး နံနတေော့ ဒဏျရာရထားတာလား ဆိုတာလညျး ကနြျောတို့ သခြောမသိရဘူး” ဟု စိုငျးဝသုနျထှနျး က ပွောသညျ။
အမြိုးသမီး ၂ ဦး၏ အလောငျးအား သှားရောကျသယျဆောငျရသညျ့လမျးသညျ မိုးရှာထားသဖွငျ့ သှားလာရလှနျစှာ ခကျခဲ ကွောငျး၊ ရောကျရှိသှားသညျ့ အခြိနျတှငျ အမြိုးသမီး ၂ ဦး၏ ရုပျအလောငျးသညျ ညိုပုတျပကျြစီးနကွေောငျး၊ အသကျအရှယျ အရ အသကျ ၄၀ ကြျော နှငျ့ ၅၀ ဝနျးကငျြခနျ့ရှိကွကွောငျး၊ လကျရှိမှာ လားရှိုးမွို့ ရငျခှဲရုံကို ပို့ဆောငျထားကွောငျး သိရ သညျ။ ထို ပုတျပှနသေညျ့ အမြိုးသမီး ၂ ဦးသညျ ညဝတျစုံ ဝမျးဆကျ ဝတျဆငျထားပွီး၊ အမြိုးသမီး ၂ ဦး လကျကို နောကျ ပွနျ ကွိုးတုတျထားသညျ့ အနအေထားနှငျ့ ခွုံပုတျထဲသို့ စှနျ့ပဈထားသညျ့ အလောငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျအတှငျး ယခုရကျပိုငျးလုယကျမှုမြားမကွာခဏဖွဈပှားကွောငျးသိရသညျ။ https://burme se. shannews.org/archives/17122
ကရငျပွညျသူ့ပါတီ (KPP) က ရှေးကောကျပှဲဝငျပွိုငျလိုသူမြားအတှကျ ဆန်ဒပွုလှာမြားကို ဇှနျ ၁၈ ရကျနမှေ့စ၍ စတငျ တောငျးယူနပွေီးဖွဈကွောငျး ပါတီ ဒုဥက်ကဋ်ဌ စောစေးဝါးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ ဒီနကေ့ စတောငျးလိုကျတယျ။ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ သူတှရေဲ့ ဆန်ဒပွုလှာ တောငျးထားတယျ။ ဝငျပွိုငျခငျြတဲ့ နရောနဲ့ ဝငျပွိုငျမယျ့ သူတှကေိုပေါ့။ ဇှနျ ၃၀ ရကျနေ့ အရောကျ ပါတီဌာနခြုပျကိုပို့ပေးဖို့ တောငျးထားတယျ” ဟု စောစေးဝါးက ပွောသညျ။
ကရငျပွညျသူ့ပါတီ အနဖွေငျ့ လာမညျ့ပါတီစုံ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ၎င်းငျးတို့၏ အမာခံနယျမွဖွေဈသညျ့ ကရငျပွညျ နယျ၊ သံတောငျကွီးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျမွမြေားနှငျ့ ရနျကုနျ၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မှနျ၊ တနင်ျသာရီရှိ မဲဆန်ဒနယျမွအေခြို့တှငျ ဝငျပွိုငျ ရနျ ပွငျဆငျမှုမြားပွုလုပျနကွေောငျး သိရသညျ။
KPP အနဖွေငျ့ ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ခွောကျနရော၊ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ တဈနရော အနိုငျရရှိခဲ့သလို ပါတီဝငျ အငျအား တဈသိနျးကြျောရှိကာ ကရငျပါတီမြားထဲတှငျ ရှေးကောကျပှဲနှဈကွိမျဆကျ နိုငျဖူးသညျ့ တဈခုတညျးသောပါတီဖွဈ သညျ။ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ထပျမံအနိုငျရရေးအတှကျ ကရငျလူငယျမြား ဝိုငျးကူလုပျကိုငျပေးနကွေောငျး KPP နှငျ့ ကရငျလူငယျမြားထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06 /%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1% 80%b8%e1%80%b1%e1%
ရှမျးပွညျနယျ၊ ကိုးကနျ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ခငျြးရှဟေျောမွို့ရှိ တရုတျ-မွနျမာ နယျစပျတှငျ လှငျ့ထူထားသော မွနျမာ အလံတိုငျကို တရုတျနယျခွားစောငျ့တပျက လကျနကျအပွညျ့အစုံဖွငျ့ လာရောကျ၍ ဖွုတျခခြဲ့မှုဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျ ၂ နိုငျငံ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနတို့၏ ညှိနှိုငျးမှုဖွငျ့ ယခုအခါ နယျနမိတျမွေ ပွနျတိုငျးရနျ သဘောတူညီမှု ရရှိထားကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလက ကိုးကနျ့ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ခငျြးရှဟေျောမွို့ အမှတျ ၂ ရပျကှကျ နယျနိမိတျ ကြောကျတိုငျ အမှတျ BP- 144/3 နှငျ့ BP-144/4 ကွား ခနျ့မှနျးမွပေုံညှနျး (MF-824965) ရှိ နှဈနိုငျငံ နယျနိမိတျမဉျြးမှ (၄.၇) မီတာခနျ့အကှာတှငျ စိုကျထူထားသော မွနျမာနိုငျငံအလံတိုငျနရောသို့ တရုတျနယျခွားစောငျ့တပျမှ ဝငျရောကျဖကျြဆီးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
“အဲဒီတုနျးက နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနကတဆငျ့ တရုတျသံအမတျကွီးကို ကနျ့ကှကျတယျ။ အဲဒီကတဆငျ့ သူတို့က နိုငျငံတျောကို သတငျးပို့တယျ။ အဲဒါပွီးတော့ နယျနမိတျကိစ်စတှေ ဆောငျရှကျနပေါပွီ။ အိမျနီးနားခငျြးနိုငျငံလညျး ဖွဈတယျ။ မိတျဝတျမပကျြအောငျ ဆောငျရှကျရမယျဆိုတဲ့ နိုငျငံတျောရဲ့ ညှနျကွားခကျြအရ နယျနမိတျဆိုငျရာ ကိစ်စတှကေို ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒနေဲ့အညီပဲ ဖွရှေငျးပါတယျ”ဟု အစိုးရ အဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယ ဝနျကွီး ဦးတငျမွငျ့က ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက“သူတို့က တခါပွနျလာဖကျြတယျ။ ကနြျောတို့က သတျမှတျတယျ။ အဲလိုနဲ့ ဖွဈတဲ့အခါမှာ ၂ နိုငျငံ ခဈြကွညျရေးအတှကျ ရညျ ရှယျပွီးတော့ သံတမနျနညျးလမျးအရ ဒီလိုဖွဈနတေယျ။ ခငျဗြားတို့ တပျတှေ ပွနျဆုတျပါဆိုပွီး ၂ ဖကျ ညှိနှိုငျးပွီ ၂ ဖကျစလုံး ကတပျဖှဲ့တှေ ပွနျဆုတျသှားတယျ”ဟု ရှငျးပွသညျ။ သို့သျော မညျသညျ့အခြိနျက စတငျဆောငျရှကျသညျ ဆိုသညျ့ အသေး စိတျဆောငျရှကျခကျြမြားကို မရှငျးပွနိုငျသေးကွောငျး၊ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနက ပိုသိ၊ ပိုပွောနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးတို့ က ပွောသညျ။
နယျစပျပွဿနာမြားသညျ တရုတျနှငျ့သာမက အိန်ဒိယ၊ ထိုငျးနိုငျငံတို့နှငျ့လညျး ဖွဈပှားလကျြရှိကွောငျး၊ သို့သျော ပွဿနာ ဖွဈပှားတိုငျးတှငျ အိမျနီးခငျြးကောငျး ပီသစှာ မိတျဝတျမပကျြစရေနျ ပါးနပျလိမ်မာစှာ ကိုယျတှယျဖွရှေငျး ဆောငျရှကျရမညျ ဖွဈကွောငျး အစိုးရအဖှဲ့ရုံး တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။
တရုတျ – မွနျမာ နှဈနိုငျငံ နယျနိမိတျအငွငျးပှားမှုမြားဖွဈပျေါပါက ဖွရှေငျးနိုငျရေးအတှကျ မွနျမာ-တရုတျ နယျစပျဒသေမြား စီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျကို ၁၉၉၇ ခုနှဈတှငျ လကျမှတျရေးထိုးထားကွကွောငျး သိရသညျ။ ထိုသဘောတူစာခြုပျပါ အခွအေနမြေားအပါအဝငျ လကျရှိ မွနျမာ – တရုတျ နယျစပျအငွငျးပှားမှုမြား ဖွရှေငျး နိုငျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျမညျ့ ကိစ်စမြားကို တရုတျနိုငျငံနှငျ့ ဆကျလကျ ဆှေးနှေးနသေလို နယျစပျ အငွငျးပှားမှုမြား ထပျမံ မဖွဈပျေါလာရေးအတှကျ ပူးတှဲရညျမှနျးခကျြတခုကို ဖျောဆောငျရနျလညျး မွနျမာအစိုးရက ကွိုးပမျးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ https://.irrawaddy.com/news/2020/06/17/224755.html
ကပျြ ၄၀ ဘီလီယံကြျော တနျဖိုးရှိ ICE မူးယဈဆေးဝါးမှုတှငျ သံသယရှိသူ အမှတျ ၉၀၃ တပျရငျးမှူး ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး စောအဝေမျးအား ရဲတပျဖှဲ့ထံစလှေတျပေးရနျ အစိုးရ၏ အကွောငျးကွားမှုကို ကလိုထူးဘောတပျဖှဲ့- KKO (ယခငျ DKBA) ဘကျက တပတျကြျောအထိ တုံ့ပွနျမှုမရှိသေးကွောငျး တာဝနျရှိသူမြားကပွောသညျ။ ရှမျးပွညျနယျ၊ လှိုငျလငျမွို့နယျ၊ တောငျကွီး-လှိုငျလငျ ကားလမျးပျေါတှငျ မလေ ၂၄ ရကျနကေ့ ICE မူးယဈဆေး ၁၆၁၅ ကီလိုနှငျ့ ဖမျးမိသူမြားအား စဈဆေး ခကျြအရ ဒုဗိုလျမှူးကွီးစောအဝေမျးအနဖွေငျ့ သယျဆောငျရောငျးဝယျမှုမြားတှငျ ပတျသကျကွောငျး သိရှိရသဖွငျ့ ၎င်းငျးအား ဥပဒေ နှငျ့အညီ စဈဆေးနိုငျရနျ ရဲတပျဖှဲ့ထံသို့ အမွနျဆုံးစလှေတျပေးရနျ ကရငျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျကိုယျစား လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မြိုးမငျးနောငျက လကျမှတျရေးထိုးကာ ဇှနျလ ၈ ရကျနရေ့ကျစှဲဖွငျ့ DKBA ထံ အကွောငျး ကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
DKBA ဘားအံမွို့နယျ၊ ဆကျဆံရေးရုံးတာဝနျခံ ဗိုလျမှူး စိုးမိုး က “စာကို ၉ ရကျနကေ့ လကျခံရရှိတော့ ဌာနခြုပျကို ဆကျ လကျပေးပို့ခဲ့ပါတယျ၊ ခုထိတော့ ကနြျော့ဆီကိုလဲ ဘာမှပွနျလညျ ညှနျကွားလာတာမရှိသေးဘူး၊ လုံ/နယျ ဝနျကွီး ဘကျကို လညျး ပွနျလညျအကွောငျးကွားတာ မရှိသေးဘူးသိရပါတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ပွောသညျ။ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စောအဝေမျးနှငျ့ ပတျသကျမှုရှိကွောငျး ပွောဆိုထားသညျ့ မူးယဈဆေးဝါးအမှုမှ ဖမျးမိထားသူမြား၏ ထှကျဆိုခကျြအရ မလေ ၂၉ ရကျနကေ့ လညျး ကလောမွို့နယျ၊ အောငျပနျးမွို့၊ တောငျကွီး-ကလော ကားလမျးမဘေးတှငျ ရပျတနျ့ထားသညျ့ ၁၂ ဘီးယာဉျ တစီး အား တှရှေိ့ခဲ့ပွီး ဇျောမငျးထှေး(ခ)ကြားပေါကျ ဆိုသူနှငျ့အတူ ယာဉျပျေါမှ ICE မူးယဈဆေး ၁၅၃၄ ကီလိုအား ထပျမံဖမျးမိခဲ့ ကွောငျး မွနျမာနိုငျငံ မူးယဈဆေးဝါ တားဆီးနိမျနှငျးရေး ရဲတပျဖှဲ့က ထုတျပွနျထားသညျ။
ဒုဗိုလျမှူးကွီး စောအဝေမျးအား ရဲတပျဖှဲ့ထံ စလှေတျပေးထားခွငျးရှိမရှိ ကရငျပွညျနယျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး၊ ကော့ကရိတျခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးနှငျ့ ကရငျပွညျနယျ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး ဝနျကွီးတို့ထံ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ရာတှငျ စဈဆေးခံရနျ စလှေတျပေး သညျဟု မကွားရသေးကွောငျး ပွောကွသညျ။ ဗိုလျမှူးစောဖားဘလဲ့က “ဒါက လူကွီးတှေ ကိုငျတှယျနတေဲ့ကိစ်စဖွဈတော့ ကနြျောတို့ကို ဘာမှညှနျကွားတာတော့ မရှိသေးဘူး၊ ဒီလိုစှပျစှဲတာအတှကျ သူတို့က ကနြျောတို့ကို ဘယျလိုသဘောထား လဲတော့ မသိဘူးပေါ့၊ ကနြျောတို့က NCA ထိုးထားတဲ့အတှကျ လူကွီးတှကေတော့ ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး ဆောငျရှကျနေ တယျလို့ ထငျပါတယျ၊ အဖှဲ့အစညျးအနနေဲ့လညျး မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးကို ဆောငျရှကျနပေါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ကလိုထူးဘောတပျဖှဲ့- KKO (ယခငျ DKBA)သညျ တနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့အဖှဲ့ဖွဈပွီး ယခုဖွဈစဉျသညျ မူးယဈဆေးဝါး တားဆီးနိမျနှငျးရေး ရဲတပျဖှဲ့မှ ဖမျးမိထားသူမြား စဈဆေးပျေါပေါကျခကျြအရ စောအဝေမျး အနဖွေငျ့ ပါဝငျပတျသကျနကွေောငျး သံသယရှိသညျ့အတှကျ ဥပဒအေရ စဈဆေးနိုငျရနျ DKBA တပျဖှဲ့ထံသို့ အကွောငျးထားခွငျးဖွဈပွီး တပျမတျောနှငျ့ တိုကျရိုကျပတျသကျမှုမရှိကွောငျး တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောထားသညျ။ https://burma.irrawaddy.com /news/202 0/ 06/18/224910.html
ကခငျြပွညျနယျ တာလောကွီးကြေးရှာရှိ ဒသေခံမြား၏ နှဈရှညျပငျစိုကျပြိုးထားသညျ့မွနေရောတှငျ ခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲ ဝငျ ရောကျလုပျကိုငျနခွေငျးကို စီစဈတှရှေိ့ပါက ဥပဒအေရ အရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး သယံဇာတဝနျကွီး က ပွောသညျ။
လကျရှိ တာလောကွီးကြေးရှာ အစိုးရ၏သဈတောကွိုးဝိုငျးအနားရှိဒသေခံမြား နှဈရှညျပငျမြား စိုကျပြိုးထားသညျ့ မွနေရော တှငျ ဦးညှနျ့အောငျကုမ်မဏီမှ တဈသြှူးငှကျပြောစိုကျရနျ ဘတျဖိုးဖွငျ့လိုကျလံထိုးထားသညျ့အတှကျ အဆိုပါကိစ်စအား တာဝနျ ယူ ဖွရှေငျးပေးရနျတိုငျကွားမှုရှိလာသညျ့အတှကျ ဇှနျလ ၁၇ ရကျနမှေ့စကာ ကှငျးဆငျးစဈဆေးထားပွီ ဖွဈကွောငျး ကခငျြ ပွညျနယျ သယံဇာတနှငျ့သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေး ဝနျကွီး ဦးဒရှီလဆိုငျးက ပွောသညျ။“မနကေ့ စုံစမျးစဈဆေး ခိုငျးလိုကျတယျဆိုတာက ဦးညှနျ့အောငျက ဘယျသူ့ရဲ့ခှငျ့ပွုမိနျ့နဲ့ ဘယျသူကလုပျဆောငျခိုငျးလို့ဆိုတဲ့ဟာကို တဈခုပွီးတဈခု စီ စဈရမှာဖွဈတယျ။ ရှာသားတှကေ လုပျခိုငျးတာလား၊ သို့မဟုတျ ဘယျအဖှဲ့စညျးက လုပျခိုငျးတာလဲဆိုတာကို စီစဈတဲ့ခါမှာ အဖွတေဈခုကရလာမှာပါ။ စီစဈလို့ ဘယျသူ့ခှငျ့ပွုမိနျ့လဲမရှိဘူးဆိုရငျ လုပျငနျးကိုလညျးရပျတနျးကရပျရမယျ။ လိုအပျရငျ အရေးယူတဲ့ထိပါ ဆောငျရှကျမှာဖွဈတယျ။” ဟု ပွောသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ တရုတျတဈသြှူးငှကျပြောစိုကျပြိုးသညျကုမ်ပဏီ ၃၀ ကြျောရှိသျောလညျး အစိုးရတှငျတရားဝငျမှတျပုံတငျထား သညျ့ ကခငျြစတားကုမ်မဏီတဈခုသာရှိသညျဟု ဆိုသညျ။
“ဘတျဖိုးနဲ့ထိုးနတော တဈလလောကျရှိနပွေီ။ ထိုးတိုငျးလညျး သှားတားတယျ။ အဲနရောနဲ့ ရှာနှငျ့ကတြော့ မနကျသှား ည ပွနျလုပျကွတယျ။ ဦးညှနျ့အောငျကုမ်မဏီဘတျဖိုးထိုးတဲ့လူကတြော့ အဲတောမှာကိုနပွေီး ထိုးနကွေတဲ့ခြိနျကတြော့ ကနြျောတို့ သှားတားတဲ့ခြိနျမြိုးတော့ မလုပျဘူး။ ကနြျောတို့မမွငျရငျ ပွနျထိုးကွတာ ခုတဈလလောကျရှိပွီ။ ပွီးလညျးပွီးခါးနီးနကွေပွီ။ လုပျပိုငျခှငျ့ရှိရငျ အထောကျထားပွပါဆို မပွနိုငျဘူး။ ကြှနျးစိုကျထားတဲ့တောငျသူတှမှောက ပွစောရှိပါတယျ။ အဲနရော ပတျလညျမှာ လညျး အကယျြ ၇ပေ အနံ ၇ပလေောကျရှိတယျ။ ဒသေခံတှေ အဲတောထဲကို သှားဖို့လာဖို့ ကြှဲ နှား တှေ ထညျ့ ဖို့လညျး ဘာမှအဆငျမပွတေော့ဘူး” ဟု တာလောကွီးကြေးရှာမှ ဦးအောငျကြျောထှနျးကပွောသညျ။
“ကနြျောတို့အနနေဲ့ သကျဆိုငျရာဌာနတှကေို တိုငျတာ ၃ ကွိမျရှိပွီ။ သကျဆိုငျရာကလညျး မလုပျသေးဘဲ ရပျထားဖို့ တားမွဈထားတယျလို့သိရ တယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က ဆကျလုပျနသေေးတုနျးဘဲ ဒီနနေဲ့ မနကေ့တော့ တောအုပျကိုယျတိုငျ သှားရောကျကှငျးဆငျး နပွေီဖွဈတဲ့တှကျ လုပျတာမတှဘေူ့း။ ကနြျောတို့အနနေဲ့လညျး ရောငျးထားတာတှေ ငှားထားတာ တှလေညျး မရှိပါဘူး” ဟု ဒသေခံတဈဦးက ပွောသညျ။
ကခငျြပွညျနယျတှငျ တရုတျတဈသြှူးငှကျပြောစိုကျထားသညျ့ မွဧေက ၁သိနျးကြျောရှိနပွေီး တဈသြှူးငှကျပြောစိုကျသညျ့ လုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ အလုပျသမားမြားကွားအပွငျ သဈတောကွိုးဝိုငျး၊ ဒသေခံမြားပိုငျမွစေသညျ့ မွယောပွသာနာအပါအဝငျ ပွဿနာမြားအားလုံးအား ထိထိရောကျရောကျ ကိုငျသှယျမညျဆိုပါက လယျယာမွဝေနျကွီးဌာန၏ လုပျထုံးလုပျနညျး စံ သတျမှတျခကျြ (SOP) ထှကျရှိမှသာ အဆငျပွနေိုငျမညျဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ လူဝငျမူကွီးကွပျရေးနဲ့ လူ့စှမျးအား ဝနျကွီး ဦးဇျောဝငျးက သုံးသပျပွောဆိုခဲ့သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/1 7/%e1%80%90%e1 %80%ac%e1%80%9c%e1%80%b1%e1
ခေါနူးစုမျ အမြိုးသားဥယြာဉျ ဧရိယာအတှငျး အိမျမှေး တိရိစ်ဆာနျမြား စညျးကမျးမဲ့ လှတျခွငျးတို့ကို ထိထိရောကျရောကျ အရေး ယူပေးရနျ အဆိုပါဥယြာဉျအနီးတဈဝိုကျတှငျ နထေိုငျသညျ့ ဒသေခံအခြို့က တောငျးဆိုကွောငျး သိရသညျ။
လူထုအခွပွေု ခရီးသှားလုပျငနျး လုပျကိုငျနသေူ ဆလိုငျးယောဟာမာနျ က “ကတြျောတို့ ဘောငျကြေးရှာရဲ့ အိမျထောငျစု လူဦးရစောရငျးမှာ မပါဝငျတဲ့ လူတှကေ နောငျတဈခြိနျ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ပွစားမဲ့နရောတှမှော တရားမဝငျ ဆိတျတှေ လှတျတာတို့ ဘောငျကြေးရှာလူတှေ အားလုံးသောကျသုံးနတေဲ့ ရစေမျးဦးမှာ အိမျတှဆေောကျလုပျပွီး အမှိုကျတှကေို စညျးကမျးမဲ့ စှနျ့ပဈတာတှရှေိတယျ။ အဲဒါတှကေို ထိထိရောကျရောကျ အရေးယူပေး စခေငျြနကွေတယျ ဒသေခံတှကေ လညျး”ဟု ပွောသညျ။
အမြိုးသားဥယြာဉျ တာဝနျရှိသူမြားအနဖွေငျ့လညျး စညျးကမျးမဲ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျမြား ဥယြာဉျအတှငျး စလှေတျခွငျးအပျေါ အရေးဆောငျရှကျမှု မလုပျတာမဟုတျပဲ ဥယြာဉျဝနျထမျးမြားလညျး လုံလောကျမှုမရှိသဖွငျ့ လကျလှမျးမမီခွငျးဖွဈကွောငျး မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ဥရောပ သမဂ်ဂအဖှဲ့တို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနသေညျ့ သဈတော စိုးမိုးရေး၊ သဈတောစီမံအုပျခြုပျရေးနှငျ့ သဈတောတရားဝငျ ကုနျသှယျမှုပွုလုပျရေးဆိုငျရာ ညှနျပေါငျးအဖှဲ့မှ ဦးရှိနျးဂငေိုငျးကပွောသညျ။ ဦးရှိနျးဂငေိုငျးက “မတူပီ၊ မငျးတပျ၊ ကနျပကျလကျ သုံးမွို့နယျဆိုတော့ ကှငျးဆငျးဝနျထမျးက နညျးလို့ဖွဈတယျ။ ဒီကိစ်စတှကေို သိရငျ တရားဥပဒေ အတိုငျး အရေးယူမှာဖွဈတယျ။ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတှေ လှတျကွောငျးခှငျ့လညျး လုံးဝမရှိဘူး”ဟုပွောသညျ။
ခေါနူးစုမျအမြိုးသားဥယြာဉျသညျ ကနျပကျလကျတှငျ တညျရှိပွီး အာဆီယံတှငျ မွသေားတောငျအမွငျ့ဆုံးစာရငျးတှငျ ပါဝငျ သကဲ့သို့ မွနျမာနိုငျငံတှငျလညျး ဒုတိယအမွငျ့ဆုံးဖွဈသညျ။ ပှငျ့လငျးရာသီမြားတှငျ ပွညျတှငျးခရီးသညျမြားကို အဓိက ဆှဲဆောငျသညျ့ ခငျြးပွညျနယျ၏ အထငျကရနရောလညျး ဖွဈသညျ။ https://www.bnionline.net/ mm/news-73524
သံဖွူဇရပျမွို့ မိနျဗလာတောငျ၌ ကုမ်ပဏီတဈခုမှ ဂပြနျစဈကနျြပစ်စညျးစမျးသပျတူးဖျောခဲ့ပွီးနောကျ မူလအတိုငျးပွနျလညျ ပွငျဆငျခွငျးမရှိသောကွောငျ့ ခနျြထားရှိသောရကေနျတှငျ ယမနျနညေ့နပေိုငျးက အမြိုးသမီးနှငျ့ မိနျးခလေး ၄ လောငျးပွိုငျ ရနေဈသဆေုံးခဲ့ကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှသတငျးရရှိသညျ။
အဆိုပါ မိနျဗလာတောငျခွရှေိ ဂရုဏာဘုနျးကွီးကြောငျး ကပ်ပိယအမြိုးသမီးကွီးတဈဦးနှငျ့ မှနျစာပလောရောကျသငျကွား နသေော ကြောငျးသူမိနျးခလေး ၃ ဦးတို့သညျ ကြောငျးဝရောဝစ်စဆောငျရှကျအပွီး ခွလေကျသနျ့စငျရနျ ရကေနျသို့ သှား ရောကျရာမှ ရနေဈသဆေုံးလကျြတှရှေိ့ခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ ကပ်ပိယ ဒျေါခငျ (၆၆) နှဈနှငျ့ ၎င်းငျး၏ ဆှမြေိုးသားခငျြးမြားဖွဈကွ သော မိနျဗလာတောငျအနီးရှိ ပငကြေးရှာမှ မအေးသီရိစံ (၁၂) နှဈ၊ မရှပေနျး (၁၂)နှဈ၊ မမိုးသဇငျ (၁၁) နှဈတို့ (၄) ဦးတို့ အလောငျးမြားအား ရဲစခနျးမှလာရောကျဆညျယူ၍ သံဖွူဇရပျမွို့နယျဆေးရုံကွီးသို့ ဇှနျလ ၁၇ ရကျ၊ ည ၈ နာရီအခြိနျတှငျ ပို့ဆောငျခဲ့ကွောငျး ရဲကွေးနနျးစာမိတ်တူအရ သိရသညျ။ မိနျဗလာတောငျအနီး အောငျကုသိုလျရပျကှကျနထေိုငျသူ လငျးလငျးခိုငျက “မိနျဗလာတောငျလူသမှေုနဲ့ပတျသကျပွီး သံဖွူဇရပျမွို့က ရဲစခနျး ကွေးနနျးစာကိုဖတျလိုကျမှ ရတှေငျးပကျြ ဆိုတာ ခုမှသိလိုကျရတယျ၊ သူခိုးတှကေ ရကေနျတူးသှားကွတယျ၊ ရဲ တှကေ ရတှေငျးပကျြလို့ပွောတာ ဟုတျနတောပဲ စညျးဝါးကိုကျနတောပဲ” ဟု ၎င်းငျး၏ Facebook တှငျ မှတျခကျြပွုထားသညျ။
ရဲကွေးနနျးစာဖျောပွခကျြတှငျ အဆိုပါ ဘုနျးကွီးကြောငျးနှငျ့ ၁ ဖာလုံခနျ့အကှာအဝေးရှိ မိနျဗလာတောငျအနီး Myanmar Eagle Co;Ltd. မှ တူးဖျောထားရှိသော ရတှေငျးပကျြအတှငျး၌ သဆေုံးလြှကျတှရှေိ့ရကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့ ၄ ဦးသဆေုံးရခွငျးမှာ ဓမ်မတာအတိုငျးဟုတျမဟုတျ အမှုမှနျပျေါပေါကျနိုငျရေး သမှေုသခေငျးဖှငျ့ ဆောငျရှကျထားကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။ Royal Eagle Myanmar Development Group Co., Ltd အား ခှငျ့ပွုခဲ့သညျ့ ကနဦးစူးစမျးလလေ့ာခှငျ့ကို ပိတျသိမျးရနျ၊ မွပွေငျ တှငျ ဆောငျရှကျထားရှိမှုမြားအား မူလအတိုငျးဖွဈအောငျ ပွနျလညျဆောငျရှကျရနျနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျ ပကျြစီး မှုအတှကျ သဈပငျမြားပွနျလညျစိုကျပြိုးသှားရနျ မှနျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ သကျဆိုငျရာကုမ်ပဏီသို့ အကွောငျးကွား ထားပွီး ဖွဈပါကွောငျး ပွီးခဲ့သညျ့ ဖဖေျောဝါရီလအတှငျး ကငျြးပသညျ့ ၁၅ ကွိမျမွောကျမှနျပွညျနယျလှတျတျော ပုံမှနျအစညျး အဝေး၌ မှနျပွညျနယျ စညျပငျသာယာရေးဝနျကွီးက ပွောကွားခဲ့သညျ။ သို့ရာတှငျ အဆိုပါကုမ်ပဏီမှ မွသေားမြားတူးဖျော ခဲ့ပွီးနောကျ လုပျငနျးပိတျသိမျးခြိနျတှငျ မူလအတိုငျး လုံးဝပွနျလညျဆောငျရှကျထားခွငျးမရှိကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောဆိုနကွေသညျ။
မိနျဗလာတောငျ၌ “မှနျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ ဒုတိယကမ်ဘာစဈ လကျကနျြပစ်စညျး ပဏာမလလေ့ာစူးစမျးရေးအဖှဲ့” ခေါငျးစဉျဖွငျ့လညျးကောငျး၊ “ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျး ဂပြနျစဈဌာနခြုပျအဆောကျအဦနရောမြားအား စဈသမိုငျးပွတိုကျ ဖျောဆောငျမညျ့ ရှပွေ့ေးစီမံကိနျး-စီမံကိနျးတာဝနျရှိသူမြားမှအပ အခှငျ့မရှိမဝငျရ”ဗီနိုငျးခြိတျဆှဲ၍လညျးကောငျး ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဧပွီလမှ စတငျတူးဖျောခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးက ဂပြနျစဈစခနျးဖွဈခဲ့သော မိနျဗလာတောငျတှငျ ဂပြနျစဈလကျနကျမြား၊ ရှခြေောငျးနှငျ့ အဖိုးတနျ ပတ်တမွား၊ စိနျ၊ ရှေ ရတနာပစ်စညျးမြား ဂပြနျတို့မွှုပျနှံထားသညျဟု ယခုကာလ အထိ လကျခံယုံကွညျသူမြား ရှိနသေညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/06/18/%e1%80%82%e1%80%bb %e1%80%95%e1%80%94%e1%
၂၂။ မွဝတီမွို့ ညမထှကျရအမိနျ့ ဇှနျလ ၃၀ ရကျထိ တိုးမွှငျ့ထားပွီး ၂လအတှငျး အမိနျ့ခြိုး ဖောကျသူ ၈၀ဝ ကြျောဖမျး မိ
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့တှငျ ည ၁၂ နာရီမှ နံနကျ ၄ နာရီအတှငျး ညမထှကျရအမိနျ့အား ဇှနျလ ၁၇ ရကျမှ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ ရကျတိုးမွှငျ့ထားလိုကျသညျဟု မွို့နယျအထှထှေေ အုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနက ယနေ့ အမိနျ့ထုတျပွနျ
လိုကျသညျ။ ကရငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ ညှနျကွားခကျြဖွငျ့ မွဝတီမွို့တှငျး ညမထှကျရအမိနျ့ကို ဧပွီလ ၁၈ ရကျမှ မလေ ၁၅ ရကျနထေိ့ ည ၁၀ နာရီမှ နံနကျ ၄ နာရီအထိ လညျးကောငျး၊ မလေ ၁၆ ရကျမှ ဇှနျလ ၁၆ ရကျနထေိ့ကို ည ၁၂ နာရီ မှ နံနကျ ၄ နာရီအထိလညျးကောငျး ထုတျပွနျထားပွီးနောကျ ယခုလို တတိယအကွိမျ ရကျတိုးမွှငျ့ ထုတျပွနျလိုကျခွငျးဖွဈ သညျ။
မူလ အမိနျ့ ထုတျပွနျထားသညျ့ ဧပွီလ ၁၈ ရကျမှ ဇှနျလ ၁၆ ရကျနထေိ့ ထုတျပွနျခကျြကို လိုကျနာမှုမရှိသူမြားအား ညစဉျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ရာ အမိနျ့ခြိုး ဖောကျသူ ၈၆၁ ဦးဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး မွဝတီမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဖွိုးဇျောကိုကိုက ပွော သညျ။ ထိုသို့ ဖမျးဆီးရမိသူမြားအား တရားရုံးတှငျ အမှုစှဲတငျပွီး ဒဏျငှေ ၅ သောငျး သို့မဟုတျ ဒဏျငှမေဆောငျနိုငျပါက ထောငျဒဏျ ၁ လ သတျမှတျ ခဲ့ရာ ထိုထဲတှငျ ဒဏျငှေ ၅ သောငျးကပျြပေးဆောငျသူ ၆၇၈ ဦး ရှိပွီး ထောငျဒဏျကခြံသူ ၁၈၃ ဦး ရှိကွောငျး မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးက ဆကျပွောသညျ။
အဆိုပါ ညမထှကျရအမိနျထုတျပွနျသညျ့ကာလအတှငျး နယျမွလေုံခွုံရေးအတှကျ တပျမ တျော၊ ရဲတပျဖှဲ့၊ နယျခွားစောငျ့တပျ နှငျ့ မီးသတျတပျဖှဲ ဝငျမြား၊ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ဝငျမြားက အမိနျ့ဆနျ့ကငျြသူမြားကို ညစဉျ လှညျ့လညျ ဖမျးဆီးခဲ့ပွီး မလေ ၁၈ရကျမှ ဇှနျလ ၁၅ ရကျနထေိ့ အမြိုးသား ၈၀၃ ဦး၊ အမြိုးသမီး ၅၈ဦး ဖမျးဆီးရမိခဲ့ရာ မွို့နယျတရားရုံးသို့ တရာစှဲ တငျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ ဖမျးဆီး ရမိသူမြားတှငျ မွို့တှငျ အခွတေ ကနြထေိုငျသညျ့ ဒသေခံအနညျးစုဖွဈပွီး ခိုးဆိုးလုနှိုကျနှငျ့ ပြံကအြမြားစု ဖွဈကွောငျး တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%bb%e1%80%9 9%e1%80% 9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
COVID 19 ကာလမှာ တောငျသူလယျသမားမြား အတှကျအထူးခြေးငှမြေားကို ယခု ဇှနျလ မှစတငျထုတျခြေး သှားရနျ ဆောငျရှကျနသေညျဟု မွနျမာ့လယျယာ ဖှံ့ဖွိုးရေးဘဏျ မှနျပွညျနယျ ဘဏျခှဲ ပွညျနယျ မနျနဂြော ဦးကြျောစှာလှိုငျ ပွော ကွားသညျ။ COVID-19 အထူးခြေးငှအေဖွဈ မိုးစပါးခြေးငှေ ရရှိထားသူ တောငျသူလယျသမားမြားကို တဈဧကလြှငျ ကပျြငါး သောငျး နှုနျးဖွငျ့ ထပျဆောငျး ထုတျခြေးပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး စီမံကိနျး၊ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာနက ဇှနျလ ၁၇ ရကျနကေ့ သတငျး ထုတျပွနျလိုကျသညျ။
“လယျသမားတှအေတှကျ အထူးခြေးငှေ တဈဧကကို ၅ သောငျးနှုနျးနဲ့ ထုတျခြေးမှာ ဖွဈပွီး အမြားဆုံး ဆယျဧကကို ထုတျ ခြေးပေးသှားမယျ အတိုးနှုနျးကလညျး စိုကျပြိုးစရိတျ အတိုးအနှုနျးအတိုငျးပဲ ၅ % ပဲ ထုတျခြေးပေးသှား အခု ဇှနျလ အတှငျး မှာထုတျခြေးပေးနိုငျဖို့ဆောငျရှကျနပေါတယျ”ဟု ဦးကြျောစှာလှိုငျ ကဆိုသညျ။ လယျယာမွပေိုငျဆိုငျခှငျ့ ပုံစံ(၇)ရှိပွီး စိုကျပြိုး ရေးစရိတျ အကွှေးကသြေူမြားကို လယျတဈဧက ၅ သောငျးကပျြနှုနျးဖွငျ့ လယျသမားတဈဦး အမြားဆုံးလယျ ၁၀ ဧကစာအ တှကျသာ နိုငျငံတဈဝနျးလုံးတှငျ ထုတျခြေးပေးသှားမညျ့ အစီအစဉျဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မိုးစပါးခြေးငှေ ရရှိသူမြားသညျ ယခငျပုံမှနျခြေးငှမှေ တဈဧကလြှငျ ကပျြတဈသိနျးခှဲ ရရှိထားပွီးဖွဈသညျ့အတှကျ စုစုပေါငျးကပျြ ၂ သိနျးရရှိ တော့မညျဖွဈသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ အထူးခြေးငှေ ထပျမံထုတျခြေးပေးခွငျးသညျ လယျသမားမြားအတှကျ ကောကျစိုကျစရိတျ ပိုရလာနိုငျသညျဟု သထုံမွို့နယျ ဒုံဝနျးမှ လယျသမား ဦးအောငျဝငျးက ပွောသညျ။“ထုတျခြေးပေးတော့ပိုကောငျးတာပေါ့လယျသမားတှကေ ပိုကျဆံလိုတာပဲလေ ငှလေိုနတေော့ ပိုကောငျးတာပေါ့ သူတို့ အခုပေးတဲ့ ခြေးငှကေ စိုကျစရိတျနဲ့ မလောကျဘူးလေ အခု ပေးတော့ အသုံးစရိတျ ပိုရှိလာတာပေါ့ လိုအပျတဲ့ ကောကျစိုကျစရိတျလေးတှေ ပိုရလာတာပေါ့” ဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ အဆိုပါ အထူးခြေးငှေ Special Covid 19 Relief Loan ကို မှနျပွညျနယျအတှငျးရှိ လယျဧက ၂ သိနျး ၈ သောငျးကြျော အတှကျ ခြေးငှေ သနျးပေါငျး ၁ သောငျး ၄ ထောငျကြျော ထုတျခြေးပေးသှားရနျ လြာထားသညျဟု သိရသညျ။
အလားတူ Covid-19 စီးပှားရေး ကုစားမှုအစီအစဉျ လုပျငနျးစီမံခကျြ၏ Cash for Lending Support အစီအစဉျတှငျ ကြေးရှာ မတညျရနျပုံငှေ စီမံကိနျးအား ကပျြ ၄၁ ဘီလြံကြျောဖွငျ့ ကြေးရှာ ၁၇ဝဝ ရှာအား အမွနျဆုံးထုတျခြေး သှားမညျဖွဈ ကွောငျး ကြေးလကျဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ဦးစီးဌာနမှ သတငျးရရှိသညျ။ http://burmese.mo nnews. org/2020/06/18/ %e1%80%9c%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ၊ တောငျကုတျမွို့၏ အရှမွေ့ောကျဘကျ ငါးမိုငျခနျ့အကှာတှငျ အငျအားရဈ(ချ)တာစကေး ၅.ဝ အဆငျ့ရှိ မွေ ငလငျြတဈခု ဇှနျ ၁၆ ရကျ ညနပေိုငျးက လှုပျခတျခဲ့ကွောငျး မိုးလဝေသနှငျ့ ဇလဗဒေ ညှနျကွားမှု ဦးစီးဌာန၏ ထုတျပွနျခကျြ အရ သိရသညျ။
ယနေ့ (ဇှနျ ၁၆ ရကျ) မွနျမာစံတျောခြိနျ ၁၇ နာရီ၊ ၄၅ မိနဈ၊ ၅ဝစက်ကနျ့ အခြိနျတှငျ ဂှမွငေလငျြစခနျးမှ မွောကျ-အနောကျ မွောကျဘကျ (၉၁) မိုငျခနျ့ကှာဝေးသော မွနျမာနိုငျငံပွညျတှငျး (တောငျကုတျမွို့၏ အရှမွေ့ောကျဘကျ (၅) မိုငျခနျ့အကှာ) မွောကျလတ်တီတှဒျ (၁၈.၉၀)ဒီဂရီ၊ အရှလေ့ောငျဂြီတှဒျ (၉၄.၂၉)ဒီဂရီ၊ အနကျ (၁၀) ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပွု၍ အငျအားရဈ(ချ) တာစကေး (၅.ဝ) အဆငျ့ရှိ အငျအားအသငျ့အတငျ့ရှိ မွငေလငျြတဈခု လှုပျခတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျခကျြအရ သိရ သညျ။ https://news-eleven .com/arti cle/178727